Article – Eleven Media Group
Posted on November 9, 2017 by Eleven Media Group
written by: မြတ်ထွဋ်
■ အပေးအယူမျှသူ နှစ်ဦး
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ အရင်နည်းပြတွေဖြစ်တဲ့ မော်ရင်ဟို၊ ဘင်နီတက်ဇ်တို့နဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက်အတွင်းကြိတ် အဖုအထစ်လေးတွေရှိခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိနည်းပြ ဇီဒန်းနဲ့သူ့အကြားမှာတော့ ဆက်ဆံရေးအတော်ပြေလည်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့စိတ်ကိုသိနေတဲ့ ဇီဒန်းကမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံရာမှာ သူ့အကြိုက်စကားလုံးလှလှလေးတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ပြီးပြောတတ်သလို၊ တစ်ခါတစ်ရံ စပိန်မီဒီယာတွေက မသိမသာသွေးထိုးတဲ့ အဆူအဖွမေးခွန်းတွေမေးလာခဲ့ရင်လည်း ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်အသာအယာတိမ်းရှောင်ပြီး ပညာသားပါပါ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇီဒန်းလက်ထက်မှာ ရီးယဲလ်အသင်းရလဒ်ကောင်းလာသလို စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကလည်း ဘင်နီတက်ဇ်လက်ထက် ပထမရာသီဝက်ထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဇီဒန်းအနေနဲ့အသင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့အရေးပါမှုကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာကိုလည်း အင်တာဗျူးအချို့မှာ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ မြင်ရပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အသင်းအတွက် အဓိကအကျဆုံးကစားသမားတစ်ဦးလားလို့ စပိန်သတင်းစာတစ်စောင်က မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ ဇီဒန်းက “မှန်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဒါနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့လည်း ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေကြောင့်ပါ။ သူမကစားနိုင်တဲ့အခါမှသာ အသင်းမှာ သူအနားယူပါတယ်။ ပွဲကစားရင်လည်း အာရုံစူးစိုက်မှုအပြည့်နဲ့ ကြိုးစားကစားသူပါ” လို့ ဇီဒန်းက ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ ဇီဒန်းရဲ့နည်းပြအလုပ်မှာ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့တာတောင် ဇီဒန်းကမာန်မာနမထားဘဲ ခွင့်ပြုခဲ့သလို၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဇီဒန်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်း စီရော်နယ်လ်ဒိုက အရင်နည်းပြတွေနဲ့မတူဘဲ အသာတကြည်လိုက်နာခဲ့ပါတယ်။ ဗလင်စီယာနဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာ ဇီဒန်းဟာ ကွင်းထဲကဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွက်ဇ်ကို ဟယ်ဆေးနဲ့လူစားလဲဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အကြံပြုချက်ကြောင့် ဗက်ဇ်ကေးကို လူစားလဲခဲ့ကြောင်း စပိန်ဘောလုံးရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ El Dia Despues မှာ ရုပ်ပုံနဲ့တကွ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ကွင်းဘေးစည်းက နည်းပြထိုင်ခုံနားကို ရောက်ရှိလာပြီး ကွင်းထဲက ဘယ်သူ့ကို ထုတ်သင့်တယ်ဆိုတာ ဇီဒန်းကို ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ဒီသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဇီဒန်းဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို နောက်ခံလူ အာဘီလိုအာနဲ့ လူစားလဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဆုံး ဖြတ်ရာမှာတော့ ဇီဒန်းဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ တိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲ သူ့သဘောနဲ့သူ လူစားလဲခဲ့တာပါ။ ဒီလူစားလဲမှုဟာ အဲဒီရာသီလာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ပထမဆုံးလူစားလဲခံရမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ သူ့ကို လူစားလဲမှန်းသိချိန်မှာ အံ့အားသင့်သွားခဲ့ပေမယ့် ထူးထူးခြားခြားမတုံ့ပြန်ခဲ့ဘဲ ပခုံးလှုပ်ပြတာလောက်ပဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ နည်းပြဖြစ်သူဇီဒန်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ နာခံတဲ့သဘောကို စီရော်နယ်လ်ဒိုက ပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရီးယဲလ်ရဲ့ ဂန္ထ၀င်ကစားသမားဇီဒန်းနဲ့ တစ်ချိန်မှာဂန္ထ၀င်ဖြစ်လာမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ရဲ့ နည်းပြ-ကစားသမားဆက်ဆံရေးဟာ အပေးအယူမျှတနေပြီး အသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် အကျိုးရှိစေခဲ့ပါတယ်။
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကို ဇီဒန်းရောက်ရှိပြီး (၄)လအကြာမှာ အသင်းအနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ (၁၉)ပွဲနိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပြီး ရှုံးပွဲက (၂)ပွဲသာရှိခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့လည်း ဒီကာလအတွင်းကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် (၂၂)ပွဲမှာ (၂၂)ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့ရလဒ်ကောင်းတွေကို သူ့ရဲ့သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းအနေနဲ့ ပထမရာသီဝက်လာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာ ရလဒ်တွေဆိုးရွားခဲ့ပြီး အဓိကပြိုင်ဘက်ဘာစီလိုနာ၊ မြို့ခံပြိုင်ဘက် အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်တို့နဲ့ အမှတ်ကွာဟခဲ့ပေမယ့် ပွဲစဉ်(၂၇)ကစပြီး ရာသီကုန်အထိ နိုင်ပွဲဆက်တိုက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ရာသီကုန်ဆုံးချိန်မှာ ချန်ပီယံဘာစီလိုနာနဲ့ တစ်မှတ်အကွာ ဒုတိယနေရာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိခဲ့ပြီး ဒီပို့တီဗိုအသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ(၂-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ကစားခဲ့ပေမယ့် ဇယားထိပ်ဆုံးက ဘာစီလိုနာကလည်း နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ အမှားအယွင်းအဖြစ်မခံဘဲ ဂရန်နာဒါအသင်းကို အနိုင်ကစားခဲ့တာကြောင့် ရီးယဲလ်အသင်းအနေနဲ့ ဒုတိယနေရာနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော မြို့ခံပြိုင်ဘက်အသင်းကို ပြန်ပြီးကျော်တက်နိုင်ခဲ့တာက ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ပရိသတ်တွေအတွက် စိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ်ကျေနပ်စရာတစ်ခုကတော့ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်လုပွဲထိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဖြစ် မန်စီးတီးနဲ့ ကစားခဲ့ရာမှာ ပထမအကျော့အဝေးကွင်းမှာ ဂိုးမရှိသရေ၊ ဒုတိယအကျော့ အိမ်ကွင်းမှာ(၁-၀) ဂိုးရလဒ်နဲ့ ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ဗိုလ်လုပွဲလိုပဲ မြို့ခံပြိုင်ဘက် အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ ထိပ်တိုက်ပြန်ပြီးဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲက စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် (၄)ကြိမ် မြောက်ဗိုလ်လုပွဲဖြစ်ပြီး ဒီရာသီဖလားက သူ့အတွက် (၃)ကြိမ်မြောက်ရယူရမယ့် ဖလားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်အောင်ပွဲက အရေးကြီးသလို စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက်လည်း၂၀၁၆ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုရယူဖို့အတွက် ဒီအောင်မြင်မှုက အတိုင်းအတာတစ်ရပ်အနေနဲ့ အရေးပါနေပါတယ်။ အီတလီနိုင်ငံ၊ မီလန်မြို့က ဆန်စီရိုကွင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ဗိုလ်လုပွဲမတိုင်မီ စီရော်နယ်လ်ဒိုက သူ့အနေနဲ့ ၂၀၁၄ ဗိုလ်လုပွဲထက် ပိုကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝနေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်း (၁၀)ကြိမ်မြောက် La Decima ဖလားရခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ဗိုလ်လုပွဲတုန်းက စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ တံကောက်ကြောဒဏ်ရာရှိနေတဲ့ကြားထဲက ကစားခဲ့ရတာပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုတင်မကဘဲ ရီးယဲလ်အသင်းအနေနဲ့လည်း ကစားသမားစုဖွဲ့မှု၊ လက်ရှိခြေစွမ်း၊ အသင်းသားအချင်းချင်းနားလည်မှု၊ နည်းပြနဲ့ ကစားသမားအပေးအယူမျှတမှု၊ အရံကစားသမားအင်အားတောင့်တင်းမှု အစရှိတာတွေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံပြီး အားရစရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းကွင်းလယ်မှာ အရင်နည်းပြဘင်နီတက်ဇ် ယုံယုံကြည်ကြည်ပွဲ ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ်ကွင်းလယ်လူကက်စမဲရိုးက အသင်းအတွက်များစွာ အကျိုးပြုနေသလို ဟယ်ဆေး၊ အစ္စကို၊ ဗက်ဇ်ကေးအစရှိတဲ့ အရံကစားသမားတွေကလည်း ပထမကစားသမားတွေရဲ့နေရာကို အစားထိုးပြီး အသင်းပုံစံမပျက်အောင် ကစားနိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက် အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကလည်း ဂရစ်ဇ်မန်း၊ တောရက်စ်၊ ဆာအူလ်၊ ကာရက်စ်ကို၊ ကိုကေအစရှိတဲ့ ကစားသမားတွေစုဖွဲ့မှုနဲ့ ခြေစွမ်းမြင့်မားတဲ့အသင်း တစ်သင်းဖြစ်တာကြောင့် ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် လွယ်ကူတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
၂၀၁၄ ဗိုလ်လုပွဲတုန်းက နောက်ဆုံးမိနစ်မှချေပဂိုးပေးခဲ့ရပြီး အချိန်ပိုမှာ(၁-၄)ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းဟာ ရီးယဲလ်အသင်းကို ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးကြွေးဆပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန်(၁၅)မိနစ်မှာ ရီးယဲလ်နောက်ခံလူရာမို့စ်က အငြင်းပွားဖွယ် လူကျွံဘောအနေအထားကနေဦးဆောင်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး၊ အက်သလက်တီကိုအသင်းအတွက်လူစားဝင်လာတဲ့ ကာရက်စ်ကိုက ပွဲချိန်(၇၉)မိနစ်မှာပြန် ချေပခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းအစမှာ အက်သလက်တီကိုရရှိတဲ့ပယ်နယ်တီကို ဂရစ်ဇ်မန်းဝင်အောင်မသွင်းနိုင်ခဲ့တာကလည်း ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် ကံကောင်းစေခဲ့ပါတယ်။
■ ရင်ခုန်လှိုက်မောရတဲ့ ပယ်နယ်တီ
အချိန်ပိုအပါအ၀င် ပွဲချိန်(၁၂၀)မိနစ်အထိ (၁-၁)ဂိုးနဲ့သရေကျနေတာကြောင့် ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်ခံယူရဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ပယ်နယ်တီအတွက်စာရင်းပေးရာမှာ နောက်ဆုံးအနိုင်ဂိုး ဖြစ်စေမယ့် (၅)လုံးမြောက်ပယ်နယ်တီကို သူကန်မယ်လို့ နည်းပြဖြစ်သူဇီဒန်းထံ စီရော်နယ်လ်ဒိုက တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ယူရို-၂၀၁၂ ဆီမီးဖိုင်နယ် စပိန်-ပေါ်တူဂီပွဲတုန်းကလည်း အခုလိုပဲ (၅)လုံးမြောက်ပယ်နယ်တီကို ကန်ဖို့စာရင်းပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက သူ့ရှေ့ကကန်တဲ့ မော်တင်ဟိုနဲ့ ဘရူနိုအဲလ်ဗတ်စ်တို့မ၀င်ခဲ့တာကြောင့် နောက်ဆုံးပယ်နယ်တီကို မကန်ခဲ့ရဘဲ ပေါ်တူဂီအသင်းအရေးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်တာကြောင့် နောက်ဆုံးပယ်နယ်တီအနိုင်ဂိုးကို ကန်သွင်းလိုတာလို့ ပေါ်တူဂီမီဒီယာတွေက ဝေဖန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကိုအမှတ်မရှိတဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဒီဗိုလ်လုပွဲမှာ နောက်ဆုံးပယ်နယ်တီကန်ဖို့ ထပ်ပြီးစီစဉ်ခဲ့တာပါ။
ဒီဗိုလ်လုပွဲအတွက် သူအသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ပွဲမတိုင်ခင် ကြုံးဝါးခဲ့ပေမယ့် တကယ်ပွဲကစားရာမှာတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာခြေစွမ်းသိပ်မပြနိုင်ဘဲ ခြေထောက်နာကျင်တဲ့ ဒဏ်ကိုလည်းခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ပယ်နယ်တီမကန်ခင် အကြောဖြေလျှော့မှု ပြုလုပ်ရာမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေနာကျင်တာကြောင့် “သွားပါပြီကွာ၊ ငါ့ခြေထောက်တွေတော့ သုံးစားမရတော့ပါဘူး၊ သူတို့ (အက်သလက်တီကိုအသင်း)တော်တော်ကစားနိုင်တာပဲ။ ငါတော်တော်ရုန်းလိုက်ရတယ်” လို့ အသင်းဖော်တွေကိုညည်းတွားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ရီးယဲလ်က ပထမပယ်နယ်တီ(၄)လုံးစလုံးဂိုးဝင်ခဲ့ပြီး အက်သလက်တီကိုအသင်းက စတုတ္ထမြောက်ပယ်နယ်တီကို ဟွမ်ဖရန်လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် (၅)လုံးမြောက်ကန်ရမယ့် ပယ်နယ်တီဟာ ရီးယဲလ်အသင်းချန်ပီယံလိဂ် ဖလားရရှိဖို့ အဆုံးအဖြတ်ပယ်နယ်တီဖြစ်လာပါ တယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ၂၀၀၈ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲတုန်းက ချယ်လ်ဆီးအသင်းဘက်ကို ပယ်နယ်တီလွဲချော်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော မန်ယူကစားသမားဖြစ်ခဲ့သလို၊ ၂၀၁၂ ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ် ရီးယဲလ်-ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ပွဲမှာလည်း ပထမဆုံးပယ်နယ်တီကို လွဲချော်ခဲ့သူပါ။ ပယ်နယ်တီမကန်ခင် “သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေသွားပါပြီ”လို့ စီရော်နယ်လ်ဒိုညည်းတွားခဲ့တာနဲ့ သူ့ရဲ့ပယ်နယ်တီ အတိတ်အမည်းစက်က ရီးယဲလ်အသင်းဖော်တွေအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီပယ်နယ်တီကို ရင်ဖိုလှိုက်မောစွာနဲ့ စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြရပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အက်သလက်တီကိုဂိုးသမား အိုဘလက်ခ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုအမှားအယွင်းမရှိ ကန်သွင်းယူလိုက်ပြီး ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကို (၁၁)ကြိမ်မြောက်ချန်ပီယံလိဂ်အောင်ပွဲရယူပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆန်စီရိုကွင်းရဲ့ မြက်ခင်းပြင်ပတ်လမ်းတစ်လျှောက်ပြေးလွှားခဲ့ပြီး အင်္ကျီကိုချွတ်ကာ အော်ဟစ်အောင်ပွဲခံပြီးနောက် စီရော်နယ်လ်ဒိုက “ဒီပယ်နယ်တီမလွဲနိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ကြိုသိနေပါတယ်”လို့ သတင်းထောက်တွေကို ၀ံ့ဝံ့ကြွားကြွားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ကစားသမားဘ၀မှာ သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုရေးထိုးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပြီး သူ့အနေနဲ့ဘောလုံးသမိုင်းမှာ တတ်နိုင်သရွေ့အောင်မြင်မှုတွေရယူပြီး မော်ကွန်းရေးထိုးသွားမယ်လို့ ကြုံးဝါးခဲ့တဲ့စကားအတိုင်း ရီးယဲလ်အသင်းမှာ တစ်ဦးချင်းအောင်မြင်မှုတွေရော ကလပ်အသင်းအောင်မြင်မှုတွေပါ ရယူနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅-၁၆ ဘောလုံးရာသီပြိုင်ပွဲစုံမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သွင်းဂိုးစုစုပေါင်း(၅၁)ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ(၁၆) ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး (၄)ရာသီဆက်ဂိုးသွင်းဘုရင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဘောလုံးလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေချိန်မှာတောင် သာယာမနေဘဲ သူ့ရဲ့အနာဂတ်လက်ကျန်ဘ၀အတွက်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ “ဘောလုံးလောကမှာ ရရှိတဲ့အောင်မြင်မှုတွေက ကျွန်တော့်ကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် လုပ်စရာတွေများစွာ ရှိနေပါသေးတယ်။ ငယ်တုန်း ရွယ်တုန်း အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ရတာပါ။ ကျွန်တော့်အသက်(၂၇)နှစ်အရွယ်ကတည်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖက်ရှင် လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို စတင်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို ကမ္ဘာတစ်လွှားပျံ့နှံ့စေဖို့ အလိုရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နောက်ထပ်(၆)နှစ်၊ (၇)နှစ်လောက်ကြာရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ဘောလုံးသမားဘ၀က ပြီးဆုံးသွားမှာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ နောက်ဘ၀တစ်ခုကို စတင်ရမှာပါ။ အဲဒီအချိန်မှ စလုပ်မယ်ဆိုရင် ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဘောလုံးသမားဘ၀ကနားရင် နည်းပြလုပ်မှာလား လို့ မေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ No လို့ပဲ ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ အသင်းဒါရိုက်တာ၊ အသင်းဥက္ကဋ္ဌအစရှိတာ တွေလည်းမလုပ်ချင်ပါဘူး”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ၂၀၁၅ နှစ်ကုန်ပိုင်းကတည်းက သူ့ရဲ့ဇာတိမြေမာဒဲရားကျွန်းက သန်း ကြွယ်သူဌေး ဒီယိုနီစီယိုပတ်စ်တာနာပိုင်ဆိုင်တဲ့ Pestana Hotel Group နဲ့ ပါတနာဖွဲ့ခဲ့ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်ဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ Pestana နဲ့ သူ့ရဲ့ CR7 အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုပူးပေါင်းပြီး Pestana CR7 ဟိုတယ်ကြီးတွေကိုဖန်ချယ်လ်၊ လစ္စဘွန်း၊ မက်ဒရစ်၊ နယူးယောက်အစရှိတဲ့မြို့တွေမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖန်ချယ်လ်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ Pestana CR7 ဟိုတယ်ဘေးမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ကစား သမားဘ၀ဖြတ်သန်းမှုဓာတ်ပုံတွေ၊ အမှတ်တရ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆုတံဆိပ်တချို့ကိုပြသထားတဲ့ ပြတိုက်လည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီရှေ့မြေကွက်လပ်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ကြီးမားတဲ့ကြေးရုပ်တုကြီးကိုလည်း တည်ဆောက်ပြသထားပါတယ်။ ဧရိယာ အကျယ်အ၀န်း(၁၄၀၀)စတုရန်းမီတာကျယ်ဝန်းတဲ့ မြေကွက်လပ်ကြီးပေါ်မှာ ဒီပြတိုက်နဲ့ ဟိုတယ်ကို ခမ်းခမ်းနားနားတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုက သူ့ကို ဟောလိဝုဒ်ရုပ် ရှင်လောကက ကမ်းလှမ်းမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း သူ့ရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ “တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန် ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သလား”ဆိုတဲ့ သတင်းထောက်တစ်ဦးရဲ့မေးခွန်းကို စီရော်နယ်လ်ဒိုက “ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ။ အရင်ကလည်း ကျွန်တော့်ကို ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့နေ့မှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စီမံကိန်းတွေတိုးတက်လာတာကိုပဲ ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်နေပါတယ်။ ဖိနပ်၊ ဘောင်းဘီ၊ အင်္ကျီ၊ လက်ဝှေ့အိတ်၊ နားကြပ်အစရှိတဲ့ ပစ္စည်းအသီးသီးကို ကျွန်တော့်ရဲ့နာမည်ပါတဲ့အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ နေရာအသီးသီးကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ “ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်လ်ဒို” ဆိုတဲ့အမည်ဟာ ထာဝရတည်မြဲနေမှာပါ”လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
■ ရီးယဲလ်မှာပဲ အဆုံးသတ်မလား
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း ရီးယဲလ်အသင်းက ထွက်မယ်လို့ လေသံပစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း နည်းပြဇီဒန်းနဲ့ အဆင်ပြေလာ၊ အသင်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာရာမှာတော့ ရီးယဲလ်မှာပဲ သူ့ရဲ့ကစားသမားဘ၀ကို အဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ ဆိုလာပြန်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ တစ်နှစ်လစာငွေ ယူရို(၂၅)သန်းနဲ့ ယူရိုသန်း(၇၀)ထက် မနည်းနိုင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုပေးနိုင်တဲ့အသင်းက နည်းပါးလွန်းပါတယ်။ မန်ယူ၊ PSG အစရှိတဲ့ အသင်းတွေက သူ့ကိုခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ သတင်းတွေတော့ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူငယ်တွေအပေါ်မှာသာ ပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့ မန်ယူအသင်းက အသက်(၃၀)နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို များပြားတဲ့ငွေပမာဏပေးပြီး ပြန်ခေါ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေသိပ်မရှိသလို၊ PSG အသင်းဥက္ကဋ္ဌ အယ်လ်ခီလိုင်ဖီ ကိုယ်တိုင်က ရီးယဲလ်ဥက္ကဋ္ဌ ပီရက်ဇ်နဲ့တွေ့ဆုံရာမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကိုမခေါ်ပါဘူးလို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။
အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို တွက်ချက်တတ်တဲ့ စူပါအေးဂျင့် မန်ဒက်စ်က သူ့ကစားသမားကို ရီးယဲလ်နဲ့သက်တမ်းတိုးတာသာ အကောင်းဆုံးလို့ သိမြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုကို စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ ရီးယဲလ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ မန်ဒက်စ်အတွက် အားသာစေတဲ့အချက်တစ်ချက်က ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ လူငယ်ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူရာမှာ စည်းမျဉ်းတွေကို ချိုးဖောက်ခဲ့တာကြောင့် ဖီဖာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပိတ်ပင်မှုကို ခံထားရတာပါပဲ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မတိုင်ခင် ကစားသမားသစ်ခေါ်ယူခွင့်မရှိတာကြောင့် အသင်းက အဓိကကျောရိုး ကစားသမားတွေကို မဆုံးရှုံးရဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ မန်ဒက်စ်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေကို မငြင်းဆန်နိုင်ဘဲ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ၂၀၂၀ (သို့ မဟုတ်) ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ သက်တမ်းရှိစေမယ့် စာချုပ်သစ်တစ်ရပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ရပါတယ်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲအပြီးမှာ ရီးယဲလ်ဥက္ကဋ္ဌပီရက်ဇ်က စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ အဓိကမဏ္ဍိုင်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် ဒီအသင်းမှာ သူ့ရဲ့ကစားသမားဘ၀ ကုန်ဆုံးတဲ့အထိရှိစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုကလည်း “လာလီဂါဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးလိဂ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကြိတ်အနယ်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကစားသမားတွေ စုပြုံကစားနေတာ ဒီမှာပါ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းမှာပဲ ကစားသမားဘ၀ပြီးဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Posted in Article, SportLeaveaComment on ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၃၆)
Posted in Article, SportTagged စီရော်နယ်လ်ဒိုLeaveaComment on ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၃၄)
Posted on November 4, 2017 November 4, 2017 by Eleven Media Group
Photos: AFP,Gettyimages,Daily Mail,Marca,Mirror,The Sun …
၂၀၁၅ နွေရာသီမှာ အီတလီလူမျိုးနည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီနဲ့ လမ်းခွဲပြီးနောက် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ နည်းပြသစ်ခန့်အပ်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အန်ဆယ်လော့တီကို ထုတ်ပယ်ပြီး တစ်ပတ်အကြာ ၂၀၁၅၊ ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့မှာ စပိန်လူမျိုးနည်းပြ ဘင်နီတက်ဇ်ကို နည်းပြသစ်အဖြစ် (၃)နှစ်စာချုပ်နဲ့ ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း ရီးယဲလ်အသင်းက တရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်နီတက်ဇ်ဟာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် (B)အသင်းနဲ့ သူ့ရဲ့နည်းပြဘ၀ကို စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူငယ်ကစားသမားဘ၀က ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်လူငယ်အသင်းမှာ (၅)နှစ်ကြာ (၁၉၇၃-၁၉၇၈) ကစားခဲ့ဖူးသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗယ်လာဒိုလစ်၊ အိုဆာဆူနာ၊ တီနီရိုက်ဖ်၊ ဗလင်စီယာအစရှိတဲ့ စပိန်ကလပ်အသင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ဖူးတဲ့ ဘင်နီတက်ဇ်ဟာ အင်္ဂလန်ကလပ်လီဗာပူးလ်အသင်းကို ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရယူပေးခဲ့တဲ့ နည်းပြတစ်ဦးဖြစ်သလို ချယ်လ်ဆီးအသင်းကိုလည်း ယာယီကိုင်တွယ်စဉ်မှာ ယူရိုပါလိဂ်ဖလား ရယူပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အီတလီကလပ်အင်တာမီလန်အသင်းကို ကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ အီတလီစူပါဖလား၊ နာပိုလီအသင်းကို ကိုပါအီတာလီယာဖလားနဲ့ အီတလီစူပါဖလားတွေ ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့နည်းပြဘ၀ဖြတ်သန်းမှုမှာ ဆုဖလားပေါင်းများစွာရယူပြီး ကလပ်အသင်းကြီးတော်တော်များများကို ကိုင်တွယ်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပေမယ့် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်လိုအသင်းကို သူတာဝန်ယူရာမှာ သိပ်ပြီးမထိုက်တန်သလို မှတ်ချက်ပြုဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်တွေ့မှာလည်း ဘင်နီတက်ဇ်ဟာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာ သူ့ရဲ့အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေချပြဖို့ထက် ကလပ်အသင်းရဲ့ မူဝါဒလမ်းစဉ်ကို လိုက်နာရသူတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာ အရင်နည်းပြတွေထက်စာရင် သူ့အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးက နည်းပါးခဲ့ပါတယ်။ အသင်းမှာ လိုအပ်ချက်ရှိလို့ တောင်းဆိုတာကိုတောင် ရီးယဲလ်ဥက္ကဋ္ဌပီရက်ဇ်အပါအ၀င် ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေက သိပ်ပြီးအလေးအနက်မထားဘဲ မဖြည့်ဆည်းပေးတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘင်နီတက်ဇ်က အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကို အားဖြည့်လိုနေပြီး တိုက်စစ်မှူးစစ်စစ်တစ်ဦးခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုရာမှာ အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေက မေ့သလိုလျော့သလိုလုပ်နေလို့ နောက်ဆုံးမှာ အသင်းရဲ့ဂိုးသွင်း ဘုရင်စီရော်နယ်လ်ဒိုကိုပဲ တိုက်စစ်မှူးအဖြစ် လုံးလုံးလျားလျားအသုံးချကစားဖို့ စီစဉ်ခဲ့ရပါတယ်။
■ ခံစစ်ကိုမကူတဲ့ ကွင်းလယ်
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ (၁၀) ကြိမ်မြောက် La Decima ဖလားကို ရယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် လာလီဂါချန်ပီယံဆုနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့တာ (၂၀၁၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း) (၃) ရာသီရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး (၃) ရာသီအတွင်း စပိန်စူပါဖလား၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား၊ စပိန်ဘုရင့်ဖလား၊ ဥရောပစူပါဖလား၊ ဖီဖာကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလား အစရှိတဲ့ ဖလားပေါင်းစုံကို ရယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် လာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာတော့ နောက်ဆုံး (၇)ရာသီအတွင်း တစ်ကြိမ်သာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို တစ်ရာသီလုံး ရေရှည်ကစားရတဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာ အောင်မြင်မှုမရတာဟာ အသင်းရဲ့အဓိက ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ဘင်နီတက်ဇ် တွေ့မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကွင်းလယ်မှာ တိုနီကရူးစ်၊ မိုဒရစ်၊ ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွက်ဇ်၊ အစ္စကိုအစရှိတဲ့ ကစားသမားတွေဟာ တိုက်စစ်ဆင်ရာမှာရော၊ ဂိုးရဖို့ပံ့ပိုးရာမှာပါ အပြစ်ပြောစရာမရှိပေမယ့် ဘောလုံးဆုံးရှုံးချိန်မှာ ဒီကစားသမားတွေရဲ့ လုပ်အားနှုန်းက လျော့နည်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကို အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ပီရက်ဇ်ကိုမကျော်နိုင်တာကြောင့် ပီရက်ဇ်စိတ်ကြိုက်ကစားသမားတွေကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ ပေါ်တိုအသင်းမှာ အငှားသွားကစားရာကနေ ၂၀၁၅ နွေရာသီမှာ ပြန်ရောက်လာတဲ့ ခံစစ်အားသန်တဲ့ ဘရာဇီးလ်ကွင်းလယ်လူ ကက်စမဲရိုးကို Box-to-Box ကွင်းလယ်လူအဖြစ်အသုံးပြုပြီး အသင်းရဲ့ စိတ်မချရတဲ့ခံစစ်ကို အားဖြည့်ချင်ပေမယ့် ပီရက်ဇ်ကတော့ ကွင်းလယ်မှာ အထက်ပါကစားသမား (၄)ဦးကိုသာ အဓိကအသုံးပြုတာမြင်ချင်သူပါ။
နောက်အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းက စီနီယာကစားသမားတချို့ ကိုယ်တိုင် ဘင်နီတက်ဇ်ကို ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနည်းပြရာထူးနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်တွေ ရှိနေကြတာပါ။ ဒါကြောင့် ရီးယဲလ်အသင်းမှာ ဘင်နီတက်ဇ်နဲ့ ကစားသမားတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးက ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမရှိဘူးဆိုရင်တောင် မပေါက်ကွဲသေးတဲ့၊ ငြိမ်သက်နေတဲ့ မီးတောင်တစ်ခုလို အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ပြာပူတွေမှုတ်ထုတ်ပြီးပေါက်ကွဲမလဲဆိုတာကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စောင့်ကြည့်နေကြပြီး ကစားသမားနဲ့ နည်းပြထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပြောဆို ဆက်ဆံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးပါ။
■ အေးစက်လာတဲ့ ဆက်ဆံရေး
ဒါပေမဲ့ ဘင်နီတက်ဇ်ဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၅ သြစတြေးလျခြေစမ်းခရီးစဉ် ပထမဆုံးမီဒီယာတွေ့ဆုံမှုမှာပဲ စကားမှားသွားခဲ့ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အမြင်မကြည်မှုကို ဦးဦးဖျားဖျား ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘင်နီတက်ဇ်က ရီးယဲလ်အသင်းမှာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆိုတာ ပြောဖို့ခက်ခဲကြောင်း၊ စီရော်နယ်လ်ဒို၊ ဘန်ဇီမာ၊ ဘေးလ်၊ ဂျိမ်းရိုဒရီဂွက်ဇ် အစရှိတဲ့ ကစားသမားတွေဟာ သူ့အရည်အချင်းနဲ့သူ ရှိကြသူတွေဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြောဆိုမှုဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကို (၃) ကြိမ်တိုင်ရယူခဲ့ပြီး ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာ (၅)ရာသီဆက်တိုက် ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူပေးထားတဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် နှာကစ်စရာစကားတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ အဓိကတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကတော့ ဘင်နီတက်ဇ်ကို စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုရာမှာ သတိထားဖို့နဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ မိမိတို့ရဲ့ ရာထူးတွေကို ဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း စေတနာနဲ့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ဘင်နီတက်ဇ်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အေးတိအေးစက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘင်နီတက်ဇ်ဟာ ရီးယဲလ်အသင်းမှာ အန်ဆယ်လော့တီ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ (၄-၃-၃) ကစားကွက်ကို (၄-၂-၃-၁)၊ (၄-၄-၂) အစရှိတဲ့ ကစားကွက်တွေနဲ့ အစားထိုးခဲ့ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုကို အထောင်တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးအဖြစ် ကစားစေကာ ဘေးလ်ကိုလည်း အတွင်းထဲဝင်ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ နောက် တိုက်စစ်ပံ့ပိုးသူတစ်ဦးအဖြစ် ကစားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာသီမစမီပဲ ဒီလိုကစားရတာ အဆင်မပြေကြောင်း စီရော်နယ်လ်ဒိုထံက စောဒကတက်မှုကို ဘင်နီတက်ဇ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ရီးယဲလ်နဲ့ ရိုးမားတို့ကစားခဲ့တဲ့ ခြေစမ်းပွဲအပြီးမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ဘေးလ်ဟာ သူ့ကို ဘောလုံးဖန်တီးပေးပို့မှုတွေ မပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း စောဒကတက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၅-၁၆ ရာသီစတင်ချိန်မှာလည်း စီရော်နယ်လ်ဒိုက အထောင်တိုက်စစ်မှူးအဖြစ် သူမကစားလိုကြောင်း၊ အရင်လိုပဲ ဘယ်တောင်ပံမှာ တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ်ကစားရတာ သူ့အတွက် ပိုကောင်းကြောင်း ဘင်နီတက်ဇ်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ ဘင်နီတက်ဇ်ရဲ့ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက စီရော်နယ်လ်ဒိုကို USB Drive (Memory Stick) တစ်ခုပေးပြီး ဒီထဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ တစ်ဖက်အသင်းကို ထိုးဖောက်ရာမှာ ဘယ်လိုကစားရမယ်ဆိုတဲ့ ကစားကွက်နည်းဗျူဟာတွေပါဝင်ကြောင်း၊ တစ်ဖက်ခံစစ်ကွက်လပ်လွတ်တွေထဲမှာ ဘယ်လိုပြေးလွှားကစားရမလဲဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေပါဝင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက “ကျွန်တော့်ရဲ့ ကစားသမားဘ၀မှာ သွင်းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးတွေအားလုံးကို USB Drive ထဲထည့်ပြီး ပြန်ပေးမယ်လို့ ဘင်နီတက်ဇ်ကို ပြောလိုက်ပါ။ ဒါတွေကိုကြည့်ပြီး သူလေ့လာလို့ ရတာပေါ့” လို့ ပြန်ပြောခဲ့ကြောင်း စပိန်သတင်းစာ El Pais က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုပြောဆိုတာဟာ နည်းပြတစ်ဦးအတွက် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စရာဖြစ်ပေမယ့် ဘင်နီတက်ဇ်အနေနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ အဆင်ပြေချောမွေ့စေမယ့် လမ်းကိုသာရွေးခဲ့ပါတယ်။ သူကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ အသင်းတွေထဲမှာ လက်ရှိရီးယဲလ်အသင်းဟာ အကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိရဲ့ နည်းပြဘ၀ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေထဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကအကောင်းဆုံး ကစားသမားဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုအကြိုက်စကားတွေနဲ့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်နွေးထွေးလာအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆက်ဆံရေးအက်ကြောင်းတစ်ခုဟာ အလုံးစုံပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့ ခက်ခဲသလို စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့လည်း ဘင်နီတက်ဇ်ဘက်က အလျှော့ပေးလိုက်လျောမှုတွေကို မသိလိုက်မသိဘာသာ,သာ ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ ပိုပြီးဆိုးရွားတာက ESPN တွေ့ဆုံတဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ရီယဲလ်အရင်နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီဟာ တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့နည်းပြတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အန်ဆယ်လော့တီနဲ့ ပြန်လက်တွဲလိုကြောင်း၊ အန်ဆယ်လော့တီကို အလွန်ပဲသတိရလွမ်းဆွတ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မိမိကစားသမားတစ်ဦးက တခြားနည်းပြတစ်ဦးကို အလိုရှိတယ်လို့ လူသိရှင်ကြားပြောဆိုခြင်းဟာ နည်းပြတစ်ဦးအတွက် မခံမရပ်နိုင်စရာဖြစ်ပေမယ့် ဘင်နီတက်ဇ်ကတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအပေါ် ဗွေမယူနိုင်ဘဲ သူ့စကားကိုမသိသလိုသာ နေခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၁၅-၁၆ ပထမရာသီဝက်ကာလကတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ခြေစွမ်းမတည်ငြိမ်တဲ့ ကာလတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သလို သူကိုယ်တိုင်လည်း ပုံမှန်ခြေစွမ်းပျောက်ဆုံးနေကြောင်း၊ သူ့မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေရှိနေကြောင်း၊ တခြားသူတွေကို မိမိရဲ့အပူမီးတွေ မကူးစက်စေလိုကြောင်း ၀န်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ခြေစွမ်းမတည်ငြိမ်ရုံမက ကွင်းထဲမှာ မလုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကိုပါ အကြိမ်ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။ လက်စ်ပါးမားစ်ကစားသမား ဒေးဗစ်ဆိုင်မွန်၊ စပို့တင်းဂီဂျွန်ကစားသမားနာချိုကာဆက်စ်၊ ရီးယဲလ်ဘက်တစ်ကစားသမား မိုလီနီရိုတို့ကို ဘောလုံးမပါဘဲ အသားလွတ်ကန်ခဲ့သလို၊ ဆီဗီလာကစားသမား ခရီဟိုယက်ကို လက်ပြန်ရိုက်တာ၊ ဘာစီလိုနာကစားသမား အဲလ်ဗတ်စ်ကို တံတောင်နဲ့တွက်တာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted in Article, SportTagged စီရော်နယ်လ်ဒိုLeaveaComment on ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၃၃)
ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၃၂)
Posted on October 26, 2017 by Eleven Media Group
ကော်ဒိုဘာ – ရီးယဲလ်ပွဲမှာ ပြခံခဲ့ရတဲ့ အနီကတ်ဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ကစားသမားဘ၀သက်တမ်းတစ်လျှောက် (၉)ကြိမ်မြောက်အနီကတ် ဖြစ်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀မှာ အနီကတ်(၅)ကြိမ် ပြသခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် ပြသခံခဲ့ရတဲ့ အနီကတ်တွေကို ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေကို ရန်လိုတဲ့ အပြုအမူတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ပြခံခဲ့ရတဲ့ အနီကတ်က (၅)ကတ်အထိရှိပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေကိုသာမက မိမိရဲ့အသင်းဖော်ကစားသမားတွေကိုလည်း သည်းခံစိတ်မရှိဘူးလို့စွပ်စွဲခံရပြီး သူ့ရဲ့ရီးယဲလ်အသင်းဖော်တစ်ဦးဖြစ်သူ အာဂျင်တီးနားတောင်ပံကစားသမား ဒီမာရီယာက စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးရဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးလုံးဝမရှိဘူးလို့ အတိအလင်းစွပ်စွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီမာရီယာက “ကျွန်တော်သူ့ကို ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလို့ လုံးဝမမြင်မိပါဘူး။ သူကသာမန်အသင်းသားတစ်ဦး ပါပဲ။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တာကလွဲလို့ ကျန်တာက သိပ်မထူးခြားပါဘူး” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေ၊ အသင်းဖော်တွေကိုသည်းခံစိတ်နည်းပါးရုံမကဘဲ ဂျာနယ်လစ်တွေကိုလည်းစိတ်မထင်ရင် မထင်သလိုပြောဆိုတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ပြီး ပညာသားပါပါပြောဆိုသင့်ပေမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ မိမိရင်ထဲမှာရှိတာကို ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်းပြောဆိုရုံမက ရိုင်းပျတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုပါ ထည့်သွင်းပြောဆိုတတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီလ (၇)ရက်နေ့က ကစားခဲ့တဲ့ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ မက်ဒရစ်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ (၀-၄)ဂိုးနဲ့ ဂိုးပြတ်အရေးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းအနေနဲ့ ၂၀၁၄-၁၅ ဘောလုံးရာသီ ဒုတိယရာသီဝက်မှာ ဗလင်စီယာ၊ ဘီလ်ဘာအို၊ ဘာစီလိုနာအစရှိတဲ့ အသင်းတွေကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ချန်ပီယံဆုအတွက် အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက်အသင်းကိုလည်း ဂိုးပြတ်အရေးနိမ့်ခဲ့တာပါ။ ဒီပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ပိုပြီးမခံချိမခံသာဖြစ်စေတာက အက်သလက်တီကိုအသင်းဘက်ကို သူ့ရဲ့ထိုးဖောက်မှုတွေဟာ အရာမရောက်ခဲ့ဘဲ ဂိုးပေါက်ကိုတည့်အောင်တစ်ကြိမ်တောင် မကန်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်ပွဲရှုံးတာရော သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ပါ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အလွန်ဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ ပွဲအပြီး မီဒီယာသမားတစ်ဦးက သူ့ကို မေးခွန်းမေးမြန်းရာမှာ ကော်ဒိုဘာနဲ့ပွဲမှာ အနီကတ်ပြထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂျာနယ်လစ်အနေနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ သည်းမခံတတ်တဲ့ စိတ်ကိုသိလို့ သူ့စိတ်ကိုဆွတဲ့အနေနဲ့ ဒီလိုမေးမြန်းခဲ့တာလားလို့ တောင်ထင်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ကိုဆွတဲ့ သဘောနဲ့ မေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ ငါးစာကို ချက်ချင်းဟပ်မိတဲ့ ငါးတစ်ကောင်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ မေးခွန်းပြီးပြီးချင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ဒေါသပါတဲ့ စကားတွေနဲ့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အဖြေကို F နဲ့စတဲ့ အဆဲစကားလုံးနဲ့ စတင်လိုက်ပြီး “ခင်ဗျား ဒီနေ့ပွဲအကြောင်းကို မေးချင်တာလား၊ ကော်ဒိုဘာနဲ့ပွဲအကြောင်းကို မေးချင်တာလား။ ကော်ဒိုဘာနဲ့ပွဲက လွန်ခဲ့တဲ့ (၃)လက ကစားခဲ့တဲ့ပွဲလေ။ အခုမှ ဘာလို့ဒါကိုလာပြီး မေးနေရတာလဲ။ ဥာဏ်ရှိတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးဆိုရင် ဒီနေ့ပွဲအကြောင်းပဲမေးမှာ။ ဒီနေ့ပွဲမှာ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ကစားပုံဘာလို့ဆိုးရွားခဲ့သလဲဆိုတာမျိုး ကိုမေးရမှာ။ ခင်ဗျားကဥာဏ်မရှိတဲ့သူပဲ” လို့ တစ်ဖက်သားကို အားမနာဘဲဒေါသနဲ့ ကမူးရှူးထိုးဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
■ ဝေဖန်စရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ မွေးနေ့ပွဲ
အက်သလက်တီကို (၄-၀)ရီးယဲလ်ပွဲအပြီးမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူ့ရဲ့အသက် (၃၀)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကို မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မက်ဒရစ်မြို့မှာရှိတဲ့ နာမည်ကျော် Zalacain စားသောက်ဆိုင်မှာ ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေထဲက လူ (၁၅၀)ကိုသီးသန့်ဖိတ်ကြားကာ မွေးနေ့ပါတီပွဲကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့မွေးနေ့ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ (၅)ရက်နေ့ဖြစ်ပြီး မက်ဒရစ်ဒါဘီပွဲ မကစားခင် (၂)ရက်အလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးတဲ့ မြို့ခံဒါဘီပွဲ အတွက်ပြင်ဆင်မှုကို မထိခိုက်စေချင်တာကြောင့် ဒီပွဲအပြီးဖေဖော်ဝါရီ (၇)ရက်နေ့ညမှ ကျင်းပဖို့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက စီစဉ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အသက် (၃၀)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပါတီဖြစ်လို့လည်း ဒီပါတီပွဲကိုသေသေချာချာစီစဉ်ခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ (၂)လလောက်ကတည်းက Zalacain စားသောက်ဆိုင်မှာ ကြီးမားတဲ့အခန်းကြီးတစ်ခန်းကို ကြိုတင်မှာကြားထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်တစ်သင်းလုံးကို သူ့ရဲ့ဧည့်သည် (၁၅၀)ဦးစာရင်းမှာထည့်သွင်းဖိတ်ကြားခဲ့ပေမယ့် အသင်းဖော်တချို့သာတက်ရောက်လာပြီး တော်တော်များများက ဒီပါတီပွဲကို ရှောင်လွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ မြို့ခံပြိုင်ဘက်ကို အရှက်တကွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲအပြီး ဒီလိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့ဆိုတာ ရီးယဲလ်ကစားသမားတွေအတွက် ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီမွေးနေ့ပါတီပွဲမှာ ဂီတဖျော်ဖြေမှုကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ပါဝင်သီဆိုသူကိုလံဘီယာအဆိုတော် ကီဗင်ရိုလ်ဒန်ဟာအမှားတစ်ခုကို ကျူးလွန်လိုက်ပါတယ်။ ပါတီပွဲမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတချို့နဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို ရိုလ်ဒန်က လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ စတိတ်စင်ပေါ်မှာ ရိုလ်ဒန်နဲ့အတူပျော်မြူးစွာနဲ့ သီချင်းသီဆိုနေပုံကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ခံပြိုင်ဘက် အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကို ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်တာကြောင့် မိမိအသင်းအပေါ် စိတ်ဆိုးနေတဲ့ ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အမျက်ဒေါသက စီရော်နယ်လ်ဒိုအပေါ်ကို စုပြုံရောက်ရှိသွားပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေက ဒီမွေးနေ့ပါတီပွဲကို ရှုတ်ချဝေဖန်ခဲ့ကြပြီး ဂိုးပြတ်ရှုံးတဲ့ပွဲအပြီး ဒီလိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကို မကျင်းပသင့်ကြောင်း၊ ကြိုတင်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီမွေးနေ့ပါတီကို ရွှေ့ဆိုင်းသင့်ကြောင်း ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေက ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Twitter မှာလည်း ဒီမွေးနေ့ပါတီပွဲကို #lafiestadelateshonra (The Party of Shame) “ရှက်စရာပါတီ” ပွဲလို့ ပရိသတ်တွေက အမည်တပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂၀၁၄-၁၅ ရာသီအဆုံးသတ်ပိုင်းက စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေကြား ဆက်ဆံရေးအက်ကြောင်းပြန်ထင်လာတဲ့ ကာလတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးထွက် (၁၆)သင်း အဆင့်မှာ ဂျာမန်ကလပ်ရှော်လ်ကေးကို ပထမအကျော့အဝေးကွင်းမှာ (၂-၀)ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယအကျော့အိမ်ကွင်းမှာ (၃-၄)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ကျော့ပေါင်း (၅-၄)ဂိုးအနိုင်ကြောင့် နောက်တစ်ဆင့်တက်ခဲ့ပေမယ့် အိမ်ကွင်းမှာ ရှုံးနိမ့်တဲ့ပွဲစဉ်အတွက် ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေက စီရော်နယ်လ်ဒိုကို အဓိကထားပြီး ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက်လီဗန်တေးနဲ့ ကစားတဲ့ အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ဘာနေဗျူး ပွဲကြည့်စင်ပေါ်ကနေ ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေက လှောင်ပြောင်အော်ဟစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပွဲအပြီး ကွင်းပြင်ကိုထွက်ခွာလာရာမှာ သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုခါယမ်းလိုက်ပြီး လှောင်ပြောင်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေကို “Fodase” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစကားက တစ်ဖက်သားကိုဆဲဆိုတဲ့၊ ရိုင်းပျတဲ့ စကားတစ်ခွန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ လက်ရှိချန်ပီယံ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ အီတလီကလပ်ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ မကျော်ဖြတ်နိုင်တာကြောင့် ဗိုလ်လုပွဲနဲ့ ဝေးနေရပါတယ်။ ပထမအကျော့ အဝေးကွင်းမှာ (၁-၂)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ဒုတိယ အကျော့အိမ်ကွင်းမှာ (၁-၁)ဂိုးနဲ့ သရေကျခဲ့တာပါ။ ဒီနှစ်ကျော့စလုံး ရီးယဲလ်အသင်းရရှိခဲ့တဲ့ ဂိုး(၂)ဂိုးကို စီရော်နယ်လ်ဒိုက သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဟက်ထရစ် (၇)ကြိမ်အပါအ၀င် ပြိုင်ပွဲစုံ ဂိုးစုစုပေါင်း (၆၁)ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ အသင်းအတွက်ကစားခဲ့တဲ့ (၅၄)ပွဲမှာ ဒီအရေအတွက် အထိရအောင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရာသီကုန်ဆုံးချိန်မှာ လာလီဂါဂိုးသွင်းအများဆုံးဆု (ပီချီချီဆု)နဲ့ ဥရောပဂိုးသွင်းအများဆုံးရွှေဖိနပ်ဆု (ESMဆု) တွေကို ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကထွက်ခဲ့ရပေမယ့် (၁၀)ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အဲဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ၊ နေမာတို့နဲ့ ပူးတွဲရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာ ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူတဲ့ကစားသမားအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ မက်ဆီရဲ့ (၇၇)ဂိုးစံချိန်ကိုလည်း စီရော်နယ်လ်ဒိုက လိုက်မီသွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄-၁၅ ဘောလုံး ရာသီဒုတိယပိုင်းမှာ ရုန်းကန်ရမှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ တစ်ဦးချင်းမှတ်တမ်းကောင်းများစွာကို ရယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ ရာသီကုန်မှာ ချန်ပီယံလိဂ် ချန်ပီယံဂုဏ်ပုဒ်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရုံမက လာလီဂါမှာလည်း ဘာစီလိုနာအောက် (၂)မှတ်အကွာ ဒုတိယနေရာနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းအနေနဲ့ စပိန်ဘုရင့်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာလည်း လက်ရှိချန်ပီယံဂုဏ်ပုဒ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး၊ ရှုံးထွက် (၁၆)သင်းအဆင့်မှာကတည်းက ပြိုင်ပွဲကနေ စောစောစီးစီးထွက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၄-၁၅ ရာသီကုန်မှာပြိုင်ဘက်ဘာစီလိုနာအသင်းက လာလီဂါဖလား၊ စပိန်ဘုရင့်ဖလားနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားတွေရယူဆွတ်ခူးခဲ့ပေမယ့် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ရာသီကုန်မှာ ဖလားတစ်လုံးမှမရခဲ့ဘဲ အဲဒီရာသီပြစရာဖလားဆိုလို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်းရယူခဲ့တဲ့ ဥရောပစူပါဖလားနဲ့ ကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလားတွေသာရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုကလပ်အသင်းရဲ့ကျရှုံးမှုဟာ နည်းပြဖြစ်သူအန်ဆယ်လော့တီရဲ့ အနာဂတ်ကို အဆုံးသတ်ရာရောက်စေခဲ့ပြီး၊ အန်ဆယ်လော့တီနဲ့ လမ်းခွဲတော့မယ်လို့ ရာသီပြီးပြီးချင်းသတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုသတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အန်ဆယ်လော့တီဘက်က ရပ်တည်တဲ့ သူ့ရဲ့သဘောထားကို အတိအလင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Instagram မှာ “သူ(အန်ဆယ်လော့တီ)ဟာ ထူးခြားတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးရှိတဲ့ နည်းပြတစ်ဦးပါ။ သူနဲ့နောက်ရာသီကိုဖြတ်သန်းရဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်” လို့ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ကျရှုံးတဲ့ရာသီအတွက် တာဝန်အရှိဆုံးနည်းပြဖြစ်သူကို မညှာတာဘူးဆိုတဲ့သဘောထားကို ပြသခဲ့ကြပါတယ်။ လာလီဂါနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အပြီး (၂)ရက် အကြာဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၅၊ မေလ(၂၅)ရက်နေ့မှာပဲ အန်ဆယ်လော့တီကို နည်းပြရာထူးက ထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ၂၀၁၅နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာလည်း အသင်းကို အပြောင်းအလဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရီးယဲလ်အသင်းမှာ ကစားသမားဘ၀ (၁၆)နှစ်ကြာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ စပိန်ဂိုးသမား ကာဆီးလက်စ်ကို ပေါ်တိုအသင်းထံ ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေက အိုဇေးလ်၊ ဒီမာရီယာ၊ အလွန်ဆိုအစရှိတဲ့ အသင်းရဲ့အဓိက, ကစားသမားတွေနဲ့ လမ်းခွဲမှုအပြီး ဒီနွေရာသီမှာ ကာဆီးလက်စ်လို အသင်းရဲ့အဓိကအကျဆုံး အသင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနဲ့ လမ်းခွဲတာကို စီရော်နယ်လ်ဒိုတွေ့မြင်ရပြီးနောက်မှာ ရီးယဲလ်အသင်းမှာ ဘယ်သူမှမတည်မြဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတစ်ခုကို ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၂၀၁၅နွေရာသီကာလအတွင်း ဘယ်မီဒီယာနဲ့မှမတွေ့ဘဲရှောင်ရှားခဲ့သလို၊ ဇွန်လ(၅)ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ “Leave me alone” ဆိုတဲ့စာသားတစ်ခုကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။ စပိန်မီဒီယာတွေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့(၂)နှစ်ကလိုပဲ ရီးယဲလ်ကနေ စီရော်နယ်လ်ဒိုထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ထင်ကြေးသတင်းတွေကို ၂၀၁၅နွေရာသီကာလတစ်လျှောက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
Posted in Article, SportLeaveaComment on ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၃၂)
ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၃၁)
■ လာခြင်းကောင်းတဲ့ ၂၀၁၄
၂၀၁၄ ခုနှစ်ဟာ ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် ရလဒ်ကောင်းတယ်လို့ မဆိုသာပေမယ့် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက်ကတော့ အကောင်းဆုံးအရာတွေ စုပြုံရောက်ရှိလာတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ (၁၂)နှစ်ကြာဝေးကွာနေတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားကို တစ်ကျော့ပြန်လည်ရရှိခဲ့ရုံမက စပိန်ဘုရင့်ဖလား၊ ဥရောပစူပါဖလား၊ ဖီဖာကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလားတွေကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုတစ်နှစ်အတွင်း အဓိကဆုဖလား(၄)လုံး ဆွတ်ခူးတာဟာ သက်တမ်း (၁၁၂)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ နည်းပြအန်ဆယ်လော့တီရဲ့ ဒုတိယရာသီဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၄-၁၅ ဘောလုံးရာသီအစမှာပဲ ဥရောပစူပါဖလားကို ရယူဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လာလီဂါပြိုင်ဘက် ယူရိုပါလိဂ်ချန်ပီယံ ဆီဗီလာအသင်းကို (၂-၀) ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး (၂)ဂိုးစလုံးကို စီရော်နယ်လ်ဒိုက သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ Man of the Match ဆုကိုရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-၁၄ ဘောလုံးရာသီမှာ လာလီဂါသွင်းဂိုး (၃၁)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာကြောင့် လာလီဂါဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားဆု (ပီချီချီ ဆု)ကိုရယူနိုင်ခဲ့သလို၊ ဥရောပဂိုးသွင်းအများဆုံး ရွှေဖိနပ်ဆု (ESMဆု)ကိုလည်း လီဗာပူးလ်တိုက်စစ်မှူးဆွာရက်ဇ်နဲ့ ပူးတွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ၂၀၁၄ခုနှစ်အတွက် ဥရောပအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု (UEFA Best Player in Europe) ကိုလည်းဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ ရာသီကြိုစပိန်စူပါဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့ မြို့ခံပြိုင်ဘက် အက်သလက်တီကိုအသင်းကို ပထမအကျော့အိမ်ကွင်းမှာ (၁-၁)ဂိုးသရေ၊ ဒုတိယအကျော့အဝေးကွင်းမှာ (၀-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် ဖလားတစ်လုံး လက်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၄-၁၅ နွေရာသီကာလအတွင်းမှာ နည်းပြအန်ဆယ်လော့တီဟာ ကစားသမားအပြောင်းအလဲ အတော်များများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တူရကီကွင်းလယ်လူဆာဟင်က အသင်းဟောင်းဒေါ့မွန်ကို ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သလို၊ စပိန်တိုက်စစ်မှူးမိုရာတာကလည်း ဂျူဗင်တပ်စ်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ အသင်းရဲ့ အဓိကကွင်းလယ်လူ ဇာဘီအလွန်ဆိုက ဘိုင်ယန်မြူးနစ်၊ အာဂျင်တီးနားတောင်ပံကစားသမား ဒီမာရီယာက မန်ယူအသင်းကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ အသင်းကိုရောက်လာသူတွေကတော့ ဂျာမန်ကွင်းလယ်လူ တိုနီကရူးစ်၊ မက္ကဆီကိုတိုက်စစ်မှူး ဟာနန်ဒက်ဇ်၊ ကိုလံဘီယာတောင်ပံကစားသမား ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွက်ဇ်၊ ကော်စတာရီကာ ဂိုးသမား နာဗတ်စ်အစရှိသူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သြဂုတ်လအတွင်း ရီးယဲလ်ဆိုစီဒက်ကို (၂-၄)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ လာလီဂါပွဲစဉ်အပြီးမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာအသင်းရဲ့ ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော်သာအသင်းကို ကိုင်တွယ်အုပ်ချုပ်သူတစ်ဦးဆိုရင် ဒီလိုအပြောင်းအရွှေ့တွေပြုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အမြင်ချင်းတော့မတူဘူးပေါ့” လို့စီရော်နယ်လ်ဒိုက ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းအတွက် နည်းပြအန်ဆယ်လော့တီရယူပေးခဲ့တဲ့ ဆုဖလားတွေက အထင်ကြီးလေးစားစရာ ဖြစ်ခဲ့သလို၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့လည်း ရီးယဲလ်မှာကစားခဲ့တဲ့ (၅)နှစ်အတွင်း ဆုဖလားအစုံအလင်ရယူနိုင်သူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ဖီဖာရုံးချုပ်တည်ရှိရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဇူးရစ်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းက အောင်မြင်မှုများစွာရယူနိုင်ခဲ့သလို၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုကလည်း တစ်ဦးချင်းအောင်မြင်မှု၊ ဆုတံဆိပ်များစွာရယူနိုင်ခဲ့လို့ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆုအတွက် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းက ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (UEFA) ဥက္ကဋ္ဌ ပလာတီနီက ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုရရှိသူဟာ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ ဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းက ကစားသမားတစ်ဦးဦးသာဖြစ်သင့်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းက ပလာတီနီရဲ့ ပြောစကားကို အတိအလင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ သမိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ကစား သမားတစ်ဦးအတွက် ဥရောပဘောလုံးလောက ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးနဲ့ ပထမဆုံးအငြင်းပွားမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလပ်အသင်း ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ တရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆုနဲ့ ဘာကြောင့်ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သလို၊ ပလာတီနီရဲ့ ဆုပေးပွဲအကြိုထင်ကြေးစကားအတွက်လည်း ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဇူးရစ်မှာကျင်းပတဲ့ဆုပေးပွဲကို စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူအပါအ၀င်မိသားစုနဲ့ အတူတက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆုပေးပွဲနဲ့ မတူတာက သူ့ရဲ့ရုရှားလူမျိုးချစ်သူ အိုင်ရီနာရှက်ခ် မပါဝင်ခဲ့တာပါပဲ။ အိုင်ရီနာရှက်ခ်ဟာ သူမရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပဖို့ရှိတာကြောင့် ဒီဆုပေးပွဲကို တက်ရောက်ခြင်းမပြုတာလို့ သူမရဲ့ မန်နေဂျာက မီဒီယာတွေကို အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှူးမက်ဆီရောက်ရှိလာရာမှာတော့ ဇူးရစ်မြို့ရောက်ပရိသတ်တချို့က “ရော်နယ်လ်ဒို၊ ရော်နယ်လ်ဒို” ဆိုပြီးလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အရင်က စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ပြိုင်ဘက်ပရိသတ်တချို့က “မက်ဆီ၊ မက်ဆီ” လို့ အော်ဟစ်လှောင်ပြောင်ခဲ့သလို၊ အခုအချိန်မှာတော့ မက်ဆီကပြန်ပြီးလှောင်ပြောင်ခံခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆုပေးပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့ရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံမှုကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး ဆုပေးပွဲမတိုင်ခင် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူ့သား ခရစ္စတီယာနိုဂျူနီယာကို မက်ဆီနဲ့ပေးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဂျူနီယာလေးဟာမက်ဆီရဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မက်ဆီအကြောင်း မကြာခဏပြောလေ့ရှိတယ်လို့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက မက်ဆီကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။
■ ဆုပေးပွဲက ဟိန်းဟောက်သံ
ဆုပေးပွဲမှာ အာဆင်နယ်ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး အွန်နရီက အကောင်းဆုံးဆုရရှိသူအမည်ကို စာအိတ်ဖွင့်ဖောက်ကြေညာပေးခဲ့ပြီး ဆုပေးပွဲစင်ပေါ်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူ့ရင်ထဲကစကားတစ်ခုကို မထင်မှတ်ဘဲ လွှတ်ကနဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆု (၄)ကြိမ်ရထားတဲ့ မက်ဆီကို လိုက်မီအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ပြောလိုက်တာပါပဲ။ မန်ယူမှာကစားစဉ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကို ပထမဆုံးရယူနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွေမှာ မက်ဆီက (၄)နှစ်ဆက် ရယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ၂၀၁၃နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွေမှာ (၂)နှစ်ဆက် ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ (၃)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကို လက်ခံရယူအပြီးမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဘယ်သူမှမလုပ်ဖူးတဲ့ ထူးခြားတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုကို စင်ပေါ်မှာပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အွန်နရီ၊ ဖီဖာဥက္ကဋ္ဌဘလတ္တာတို့ရဲ့ကြားမှာ ရပ်နေရာကနေ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆုကို ရှေ့မှာထားပြီး လက်သီးနှစ်ဖက်ဆုပ်ကာ သားရဲတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဟိန်းဟောက်သလို အော်ဟစ်လိုက်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ထွက်လာတဲ့အသံက ကျားတစ်ကောင်၊ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ဟိန်းဟောက်သလို “ဝေါင်း” ဆိုတဲ့အသံမျိုးမဟုတ်ဘဲ “စီး . . .” (Siiiiii) ဆိုတဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ အသံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဒီလိုစင်ပေါ်မှာ ဟိန်းဟောက်ခဲ့တာဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုနဲ့ သူ့ကို မထိုက်တန်ဘူးလို့ အရိပ်အမြွက်ပြောခဲ့တဲ့ UEFA ဥက္ကဋ္ဌ ပလာတီနီကို တုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ စပိန်မီဒီယာတချို့က ကောက်ချက်ချကြပါတယ်။
အဲဒီဆုပေးပွဲကို သူ့ရဲ့ချစ်သူ အိုင်ရီနာရှက်ခ် မတက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် သူတို့(၂)ဦးရဲ့ အချစ်ရေးအဆုံးသတ်ချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ ထင်ကြေးသတင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆုပေးပွဲအပြီး ရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး သူနဲ့အိုင်ရီနာရှက်ခ်တို့ရဲ့ လက်တွဲမှုဟာ (၅)နှစ်အကြာမှာပြီးဆုံးသွားပြီလို့ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဘက်က စတင်လမ်းခွဲသယောင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့် အမှန်တကယ်ကတော့ အိုင်ရီနာရှက်ခ်က သူ့ကိုထားရစ်ခဲ့တာလို့ အတွင်းသတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့လမ်းမခွဲမီလအနည်းငယ်အလိုမှာ နှစ်ဦးကြားသူစိမ်းပြင်ပြင်ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း သတင်းသမားတွေ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အိုင်ရီနာရှက်ခ်က စီရော်နယ်လ်ဒိုရှိရာမက်ဒရစ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သာပျော်မြူးနေပြီး သူမကတော့ ဟိုတယ်မှာပဲ အချိန်ဖြုန်းခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အိုင်ရီနာရှက်ခ်ရဲ့ မန်နေဂျာကတော့ သူတို့ရဲ့လမ်းခွဲမှုဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ မိခင် ဒိုလိုရက်စ်ရဲ့စနက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အိုင်ရီနာရှက်ခ်အနေနဲ့ ဒိုလိုရက်စ်ရဲ့အသက် (၆၀)ပြည့်မွေးနေ့ပါတီပွဲကို မတက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် သမီးယောက္ခမ အလောင်းအလျာ (၂)ဦးကြားတင်းမာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အစ်မ(၂)ဦးနဲ့ သူမအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ ထင်ကြေးသတင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ (၂)ဦးလမ်းခွဲချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ဘာခံစားမှုမှမရှိသယောင်နေပြခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့အစ်မအယ်လ်မာကတော့ အိုင်ရီနာရှက်ခ်လမ်းခွဲသွားချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အတော့်ကိုခံစားခဲ့ရကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုပေးပွဲမှာ “စီး . . .” (Siiiiii)လို့ အော်ခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ပြိုင်ဘက်ပရိသတ်တချို့ သူ့ကိုလှောင်ပြောင်စရာအကွက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လာလီဂါပွဲစဉ်တချို့မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ပရိသတ်တွေက “စီး . . .” (Siiiiii)လို့ အော်ဟစ်ကာလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရီးယဲလ်နဲ့ ကော်ဒိုဘာတို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူ အိန်ဂျယ်ခရက်စပိုရဲ့ မျက်နှာကိုလက်နဲ့ရိုက်ခဲ့ပြီး အခြားနောက်ခံလူ အီဒီမာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့် အနီကတ်ပြထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်ကွင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်က သူ့ကို “စီး . . .” (Siiiiii)လို့ အော်ဟစ်ပြီးလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူ့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေကို ပြန်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ် . . .
Posted in Article, SportLeaveaComment on ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၃၁)
ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၃၀)
■ အန်ဆယ်လော့တီနှင့် . . .
၂၀၁၃-၁၄ ဘောလုံးရာသီမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုအပါအ၀င် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ ထူးခြားတဲ့နည်းပြတစ်ဦးနဲ့ လက်တွဲခဲ့ရပါတယ်။ အီတလီလူမျိုးနည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီဟာ ရီးယဲလ်ကစားသမားအများစုအတွက် အရင်နည်းပြတွေနဲ့မတူတဲ့ နည်းပြတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှိမ့်ချပြီး ရိုးရိုးအေးအေးနေတတ်တဲ့ အန်ဆယ်လော့တီဟာ ကစားသမားတွေဆီက သူလိုချင်တာကိုရအောင် လေသံအေးအေးနဲ့ တောင်းဆိုတတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေကို အရင်ဆုံးသိအောင်ကြိုးစားပြီးမှ သူလိုတဲ့ပုံစံကိုရအောင် အန်ဆယ်လော့တီက သွတ်သွင်းတာပါ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုကိုလည်း တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးအဖြစ် လုံးလုံးလျားလျားကစားစေဖို့ အန်ဆယ်လော့တီက ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် ဆွမ်ဆီးအသင်းနည်းပြပြုလုပ်နေပြီး အဲဒီတုန်းက အန်ဆယ်လော့တီရဲ့ လက်ထောက်နည်းပြဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပေါလ်ကလီမန့်က “ကျွန်တော်တို့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ကို စတင်တာဝန်ယူချိန်မှာ ကာလို (အန်ဆယ်လော့တီ) က စီရော်နယ်လ်ဒိုကို တိုက်စစ်မှူးစစ်စစ်အဖြစ် ကစားစေဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ခံစစ်အတွက် သိပ်ပြီးတာဝန်မယူနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုက မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ကျွန်တော်တို့ အလိုရှိသလို မကစားနိုင်ကြောင်း ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်” လို့ အဲဒီတုန်းကအကြောင်း အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ တောင်ပံမှာအတက်အဆင်းလုပ်ပြီးကစားတတ်သူတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲ ခံစစ်ကိုကူဖို့ထက် တိုက်စစ်ကိုပဲ အမြဲလိုက်ပါကစားချင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်တောင်ပံမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုထက်စာရင် ဒီမာရီယာကပိုပြီး သင့်တော်လိမ့်မယ်လို့ အန်ဆယ်လော့တီက ယူဆခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း နည်းပြအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက” ကျွန်တော် ဘယ်တောင်ပံမှာကစားပြီး တောင်ပံကနေတိုက်စစ်ဆင်ရတာကိုပဲ ကြိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာလည်း ဒီလိုပဲကစားခဲ့တာပါ” လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကစားသမားတွေရဲ့ဆန္ဒကို အမြဲဦးစားပေးပြီး ဘောလုံးမှာ အရေးကြီးဆုံးကကစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လက်ကိုင်ထားတဲ့ အန်ဆယ်လော့တီဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ဆန္ဒကို လျစ်လျူမရှုခဲ့ဘဲ လက်သင့်ခံခဲ့ပြီး သူနဲ့ကိုက်ညီမယ့်ကစားကွက်ကို ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ အန်ဆယ်လော့တီရဲ့ (၄-၃-၃)ကစားကွက်ဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ကစားရတာ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေခဲ့ပါ တယ်။ ဘယ်တောင်ပံမှာ စီရော်နယ်လ်ဒို၊ ညာတောင်ပံမှာ ဂါရတ်ဘေးလ်တို့ရှိပြီး တိုက်စစ်နံပါတ် (၉)နေရာမှာတော့ ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှူး ဘန်ဇီမာရှိနေပါတယ်။ နောင်တစ်ချိန် ဘာစီလိုနာမှာ မက်ဆီ၊ ဆွာရက်ဇ်၊ နေမာ MSN တိုက်စစ်အတွဲက နာမည်ကြီးလာသလို၊ ရီးယဲလ်မှာလည်း ဘန်ဇီမာ၊ ဘေးလ်၊ စီရော်နယ်လ်ဒို BBC တိုက်စစ်အတွဲက ပြိုင်ဘက်တွေအတွက် ကြောက်စရာအတွဲ အဖက်ဖြစ်လာပါတယ်။ ၂၀၁၃-၁၄ ဘောလုံးရာသီအဆုံးသတ်ကာလတွေကတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ရုန်းကန်ရတဲ့အချိန်တွေပါပဲ။ သူ့ရဲ့ ဒူးအရွတ်ဒဏ်ရာက ဒုက္ခပေးနေပြီး ကလပ်အသင်း ရီးယဲလ်က (၁၂)နှစ်အတွင်း ပထမဆုံး ပြန်လည်ရယူမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားအတွက် အသည်းအသန်တိုက်ပွဲဝင်နေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်အပြင် လာလီဂါ၊ စပိန်ဘုရင့်ဖလားအစရှိတဲ့ ပြည်တွင်းဖလားတွေကိုပါရယူဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လာလီဂါမှာ ဆီမြွန်နီရဲ့အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းက ရာသီအဆုံးသတ်ချိန်မှာ စပိန်ထိပ်သီးရီးယဲလ်နဲ့ ဘာစီလိုနာတို့ကို (၃)မှတ်အသာနဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာရယူသွားခဲ့ပြီး၊ နှစ်ပေါင်း (၁၈)နှစ် ကြာဝေးကွာနေတဲ့ လာလီဂါချန်ပီယံဆုကို တစ်ကျော့ပြန်သိမ်းပိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာနဲ့ရီးယဲလ်တို့ (၈၇)မှတ်စီရမှတ်တူခဲ့ပေမယ့် လာလီဂါတွေ့ဆုံမှု နှစ်ကျော့စလုံးမှာ ရီးယဲလ်အသင်းက ဘာစီလိုနာကို အရေးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် ဘာစီလိုနာက ဒုတိယနေရာရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ရီးယဲလ်က တတိယနေရာနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။
■ အဓိကဖလား (၂)လုံး
အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲမှာ အခြေအနေမကောင်းခဲ့ပေမယ့် ရီးယဲလ်အသင်းအနေနဲ့ ကျန်အဓိကဖလား ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ စပိန်ဘုရင့်ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ စပိန်ဘုရင့်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ မဟာပြိုင်ဘက် ဘာစီလိုနာနဲ့ El Clasico ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် ဗလင်စီယာအသင်းရဲ့ မက်စ်တဲလားကွင်းမှာကစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီပွဲမှာတော့ ဒူးအရွတ်ဒဏ်ရာကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုမပါနိုင်ခဲ့ဘဲ ပွဲကြည့်စင်ပေါ်ကသာ သူ့အသင်းကို အားပေးခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စပိန်ဘုရင့်ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ မြို့ခံပြိုင်ဘက် အက်သလက်တီကိုကို အိမ်ကွင်းမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ဒီနှစ်မှာတော့ ဘာစီလိုနာကို ဒီမာရီယာ၊ ဘေးလ်တို့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့အတူ (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပွဲအပြီးဆုမယူခင် ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ ဒီပွဲကိုပါဝင်မကစားရဘဲ ပရိသတ်တစ်ဦးအဖြစ် လာအားပေးခဲ့ရတဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ကွင်းထဲကိုဆင်းလာပြီး သူ့ရဲ့မဟာပြိုင်ဘက် ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး မက်ဆီကို နှစ်သိမ့်ခဲ့တာပါ။ အနက်ရောင်အနောက်တိုင်းဝတ်စုံ၊ အနက်ရောင်နက်ကတိုင်၊ အနက်ရောင်ဦးထုပ်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက မက်ဆီရဲ့ပခုံးကိုပွေ့ဖက်ကာ အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့ပြီး သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ကွင်းထဲကရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံပုံနဲ့ မက်ဆီရဲ့မာန်မာနမရှိတဲ့ အပြုအမူတွေက သူတို့နှစ်ဦးအကြား ခါးသီးတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပရိသတ်တွေ တဒင်္ဂမေ့လျော့သွားစေပါတယ်။ အဲဒီနောက် အဖြူရောင်ရီးယဲလ်ကစားသမားတွေရဲ့ အောင်ပွဲခံမှုကြားမှာ အနက်ရောင်ဝတ်စုံ၊ အနက်ရောင် ဦးထုပ်နဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက မလိုက်ဖက်စွာ ၀င်ရောက်အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်မှာ ရှော်လ်ကေး၊ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ဒေါ့မွန်၊ ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အစရှိတဲ့ ဂျာမန်ကလပ်အသင်းကြီး(၃)သင်းကို ဆက်တိုက်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ကစားရတဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲ(၂) ပွဲကတော့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အတွက် ထူးခြားတဲ့ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး (၂)ကျော့စလုံး (ပထမအကျော့ ၁-၀၊ ဒုတိယအကျော့ ၄-၀ ဂိုး) အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကို ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ခါးသီးတဲ့ပြိုင်ဘက် ဘာစီလိုနာအသင်းနည်းပြဟောင်း ဂွါဒီယိုလာ ကိုင်တွယ်နေတာ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကျော့မှာ သူ့ရဲ့ နည်းဗျူဟာချဉ်းကပ်မှုအမှားကို ရီးယဲလ်အသင်းက ကောင်းကောင်းအသုံးချပြီး (၄)ဂိုးအထိသွင်းကာ အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ ၄-၂-၄ ကစားကွက်နဲ့ ပွဲထွက်လာတဲ့ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ နည်းဗျူဟာအမှားဟာ သူ့ရဲ့နည်းပြဘ၀ အဆိုးရွားဆုံး ဥရောပရှုံးနိမ့်မှုဖြစ်ခဲ့ရုံသာမက ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အတွက်လည်း ဥရောပမှာ ဂိုးအပြတ်ဆုံးရှုံးနိမ့်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ(၄)ဂိုးကို ပွဲချိန်(၁၆)မိနစ်နဲ့ (၂၀)မိနစ်မှာ နောက်ခံလူရာမို့စ်က ခေါင်းတိုက်သွင်းဂိုးတွေနဲ့ (၂)ဂိုး၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ပွဲချိန်(၃၄)မိနစ်နဲ့ (၉၀) မိနစ်တွေမှာ(၂)ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ပွဲအတွက် စီရော်နယ်လ်ဒိုက အသင်းရဲ့ လူအေးနည်းပြကြီး အန်ဆယ်လော့တီကို ချီးကျူးခဲ့ပြီး အန်ဆယ်လော့တီဟာ ရီးယဲလ်ကစားသမားတွေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံးအခြေအနေရောက်ရှိအောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
■ မက်ဒရစ်ဒါဘီ ဗိုလ်လုပွဲ
၂၀၁၄ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ အေစီမီလန်၊ ဘာစီလိုနာ၊ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတွေကို ဖြတ်ကျော်လာတဲ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက် အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက်တော့ ထူးခြားနေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဒီပွဲကစားရမယ့်နေရာက သူ့ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားစတင်ခဲ့ရာ လစ္စဘွန်းမြေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ လစ္စဘွန်းမြို့က ဘင်ဖီကာအသင်းရဲ့Estadio da Luz ကွင်းမှာ ကစားရမှာဖြစ်ပြီး လောလောလတ်လတ် လာလီဂါချန်ပီယံ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းက အဲဒီရာသီ လာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာ ရီးယဲလ်ကို (၁)ပွဲနိုင်၊ (၁)ပွဲသရေရလဒ်တွေနဲ့ အသာစီးရယူထားတဲ့ အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာနေဗျူးကွင်းမှာ(၁-၀) ဂိုး၊ သူတို့ရဲ့ ဗင်းဆင့်ကယ်လ်ဒါရွန်ကွင်းမှာ (၂-၂)ဂိုးတွေနဲ့ ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စပိန်ဘုရင့်ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်တွေ့ဆုံမှုမှာတော့ ရီးယဲလ်အသင်းက နှစ်ကျော့စလုံး (၃-၀)ဂိုး၊ (၂-၀) ဂိုးရလဒ်တွေနဲ့ ပြန်အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ မိနစ်(၉၀)အထိ အနိုင်ရခဲ့တဲ့အသင်းက အက်သလက်တီကိုအသင်းပါ။ ပွဲချိန် (၂၇)မိနစ်မှာ နောက်ခံလူဂိုဒင်ရဲ့ သွင်းဂိုးနဲ့ အက်သလက်တီကိုအသင်းက တစ်ပွဲလုံးဦးဆောင်ခဲ့ပြီး နာကျင်အချိန်ပို (၉၃)မိနစ်ရောက်မှ ရီးယဲလ်နောက်ခံလူ ရာမို့စ်က ချေပဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ အက်သလက်တီကိုအသင်းရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူး ဒီယေဂိုကော်စတာ ပွဲချိန်(၉)မိနစ်မှာကတည်းက ဒဏ်ရာရပြီး လူစားလဲခံခဲ့ရတာကလည်း အက်သလက်တီကိုအသင်းအတွက် တိုက်စစ်အားလျော့စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန် မိနစ်(၁၁၀)မှာ ဒီမာရီယာရဲ့ပေးပို့မှုက တစ်ဆင့်ဂါရတ်ဘေးလ်က ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး အချိန်ပိုပြီးဖို့ (၂)မိနစ်အလိုမှာ နောက်ခံလူမာဆယ်လိုက ရီးယဲလ်အတွက် အနိုင်သေချာစေမယ့် နောက်ထပ်ဂိုး တစ်ဂိုးကို သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန်မိနစ် (၁၂၀)မှာ အက်သလက်တီကိုကွင်းလယ်လူဂါဘီက စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ပယ်နယ်တီစည်းအတွင်းလှဲချတာကြောင့် ရီးယဲလ်အသင်း ပယ်နယ်တီရခဲ့ပြီး ဒီပွဲသိမ်းပယ်နယ်တီဂိုးကို စီရော်နယ်လ်ဒို ကိုယ်တိုင်ကန်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
ပွဲအပြီးမှာ မြို့ခံပြိုင်ဘက်ကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားကို ရီးယဲလ်အသင်း ပြန်လည်ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (၁၀)လုံးမြောက် ဖလားဖြစ်တဲ့ La decima ဆုဖလားကို ရီးယဲလ်အသင်းရရှိပြီးချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခု ပြည့်မြောက်သွားပြီလို့ Estadio da Luz ကွင်းထဲက Mixed Zone မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ မန်ယူအသင်းနဲ့ ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားကို နောက်(၆)နှစ်အကြာမှာ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ်ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
■ အောင်ပွဲနဲ့အတူ ဝေဖန်မှု
ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲအပြီး နောက်တစ်နေ့ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ စပိန်သတင်းစာတချို့မှာ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့အောင်ပွဲကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုနဲ့အတူ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို အပြစ်ရှာချင်တဲ့ ဝေဖန်မှုတချို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမိနစ်ပယ်နယ်တီသွင်းယူပြီးချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူ့ရဲ့အင်္ကျီကိုချွတ်ကာ ပရိသတ်တွေရှိရာ ပွဲကြည့်စင်ရှေ့ပြေးသွားပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ သူ့နောက်က ရီးယဲလ်အသင်းဖော်အချို့ ပြေးလိုက်လာပြီး သူနဲ့အတူအောင်ပွဲခံချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဒီကစားသမားအုပ်စုထဲက ခွဲထွက်လိုက်ပြီး သူတစ်ဦးတည်း ကြွက်သားတွေကိုပြသကာ သီးခြားအောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်က စပိန်မီဒီယာတွေအတွက် သူ့ကိုဝေဖန်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပွဲချိန်(၉၃)မိနစ်မှာ အရေးပါတဲ့ချေပဂိုးကို ရာမို့စ်သွင်းယူချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ လိုက်ပါအောင်ပွဲခံခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ စွပ်စွဲမှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရီးယဲလ်အတွက် အသက်ဆက်ဂိုးကို ရာမို့စ်သွင်းယူပြီးချိန်မှာ အုပ်စုလိုက်အောင်ပွဲခံတဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းသားတွေထဲ မပါဝင်ခဲ့သူဆိုလို့ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ဂိုးသမား ကာဆီးလက်စ်တို့သာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကာဆီးလက်စ်ကတော့ ဂိုးပေါက်ကို စောင့်ရှောက်နေရတဲ့တာဝန်ကြောင့် အဝေးကနေသာ အောင်ပွဲခံခဲ့တာ ပြောစရာမရှိခဲ့ပေမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ပျက်ကွက်မှုကတော့ အပြစ်ရှာချင်တဲ့သူတွေအတွက် ထောက်ပြစရာအကွက် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ ရာသီအဆုံးသတ်ပိုင်းမှာ ဒူးအရွတ်ဒဏ်ရာနဲ့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ကြားထဲက အသင်းအတွက် အဓိကဖလား(၂)လုံးကို ရယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဒဏ်ရာကြားက ရုန်းကန်ကစားခဲ့ခြင်းဟာ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာ သက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်မှာကျင်းပတဲ့ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ ဂျာမနီ၊ အမေရိကန်၊ ဂါနာအသင်းတွေနဲ့ တစ်အုပ်စုတည်းကျခဲ့ပြီး အုပ်စုအဖွင့်မှာ ဂျာမနီကို (၀-၄)ဂိုးနဲ့ရှုံး၊ ဒုတိယပွဲမှာ အမေရိကန်နဲ့ (၂- ၂) ဂိုးသရေ၊ နောက်ဆုံးပွဲမှာ ဂါနာကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရပြီး (၁)ပွဲနိုင်၊ (၁)ပွဲသရေ၊ (၁)ပွဲရှုံး ရမှတ် (၄)မှတ်နဲ့ အုပ်စုအဆင့်ကနေ ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလားအပြီး နွေရာသီကာလမှာ သူ့ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ ဒီဒူးအရွတ်ဒဏ်ရာကို သေသေချာချာအနားယူပြီး ကုသဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဒဏ်ရာပြဿနာရှိလျက်နဲ့ ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီ အဆုံးသတ်ပိုင်း ကလပ်အသင်းပွဲစဉ်တွေကို ကစားခဲ့တာနဲ့ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ကစားခဲ့တာတွေက သူ့ရဲ့ကစားသမားဘ၀ ရပ်တည်မှုကိုပါ ခြိမ်းခြောက်သလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာ မကစားရမှာစိုးရိမ်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာအမှန်တကယ်ခံစားရတာကို ထုတ်ဖော်မပြောခဲ့ဘူးလို့လည်း ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဆရာဝန်တွေက ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီဒူးအရွတ်ဒဏ်ရာဟာ ပိုပြီးအခြေအနေဆိုးရွားသွားခဲ့ရင် (ဒါမှမဟုတ်) ကုသမှုသေချာမခံယူခဲ့ရင် သူ့ရဲ့ကစားသမားဘ၀ကိုပါအဆုံးသတ်သွားစေနိုင်တဲ့ဒဏ်ရာမျိုးပါ။ ဘရာဇီးလ်နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ကစားသမားဘ၀ကို အဆုံးသတ်သွားစေခဲ့တာကလည်း ဒီလိုဒဏ်ရာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၄-၁၅ ဘောလုံးရာသီသစ်မစတင်မီ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ဒဏ်ရာ ပျောက်ကင်းစေဖို့အတွက် နာမည်ကျော်ဆရာဝန် (၃)ဦးနဲ့ ကုသဖို့ အေးဂျင့်မန်ဒက်စ်က စီစဉ်ပေးခဲ့ပြီး ဒီအထဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ နာမည်ကျော်စပိန်တင်းနစ်ကစားသမား နဒါးလ်ရဲ့ ဒူးအရွတ်ဒဏ်ရာကို ကုသပေးခဲ့သူ ဒေါက်တာမီခယ်လ်ဆန်းချက်ဇ်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
Photos: AP,Gettyimages,PA,Daily Mail,Mirror,The Sun, Zimbio …
Posted in Article, SportLeaveaComment on ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၃၀)
Posted on October 16, 2017 by Eleven Media Group
Photos: AP,Gettyimages,PA,FIFA,Man Utd,Daily Mail,Mirror,The Sun …
■ ခါးပြီးရင်းခါးလာတဲ့ ဘာစီလိုနာ
စပိန်မြေမှာ ရီးယဲလ်နဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတွေဟာ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက် ပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံး ကလပ်အသင်းတွေဖြစ်သလို စပိန်မြေကို စီရော်နယ်လ်ဒိုရောက်ရှိလာခြင်းကလည်း နဂိုကတည်းကတောက်လောင်နေတဲ့ ဒီနှစ်သင်းရဲ့ အမုန်းမီးတောက်တွေကို လေပင့်သလို ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ရီးယဲလ်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက အဓိကပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်လာသလို၊ ဘာစီလိုနာမှာလည်း မက်ဆီကအသင်းကို ကိုယ်စားပြုရာ Icon တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့ရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုက လာလီဂါပွဲစဉ်တွေမှာ သွင်းဂိုးတွေနဲ့အတူ အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာပါတယ်။ လာလီဂါ ရက်သတ္တပတ်တိုင်းမှာ သူတို့နှစ်ဦးက ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကို ဂိုးဘယ်လောက်သွင်းယူကြမလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေစောင့်ကြည့်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ ရီးယဲလ်နဲ့ဘာစီလိုနာတို့တွေ့ဆုံတဲ့ El Clásico ပွဲစဉ်မှ မဟုတ်ဘဲ ရက်သတ္တပတ်တိုင်း၊ နေ့ရက်တိုင်းမှာ သူတို့နှစ်ဦးကြားကပြိုင်ဆိုင်မှုက မီးရထားသံလမ်းတွေလို မဆုံးနိုင်တဲ့ ပြိုင်မျဉ်းတွေသဖွယ် ဖြစ်လာပါတယ်။ လာလီဂါဂိုးသွင်းအများဆုံး (ပီချီချီ)ဆုအတွက် ရာသီတိုင်းမှာ သူတို့နှစ်ဦးက အပြိုင်လိုဖြစ်နေပြီး စီရော်နယ်လ်ဒို စပိန်မြေကိုရောက်ရှိလာချိန်ကစပြီး (၆)ရာသီအတွင်း သူတို့နှစ်ဦးကပဲ ပီချီချီဆုကို(၃)ကြိမ်စီဆွတ်ခူးခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၁-၁၂ ဘောလုံးရာသီမှာ ရီးယဲလ်အသင်းက စံချိန်တင်ရဂိုး၊ ရမှတ်တွေနဲ့ လာလီဂါချန်ပီယံဆုဆွတ်ခူးခဲ့ပေမယ့် အဲဒီရာသီမှာ မက်ဆီကလာလီဂါသမိုင်းမှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမရှိဖူးတဲ့ တစ်ရာသီအတွင်းလိဂ်သွင်းဂိုး(၅၀)နဲ့ ပီချီချီဆုရယူသွားလို့ (၄၆)ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုတစ်ယောက် ကြိတ်မနိုင်၊ ခဲမရ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင်၂၀၁၁-၁၂ဘောလုံးရာသီအတွက် ဥရောပအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု(UEFA Best Player In Europe Award) ကို ချီးမြှင့်ရာမှာ ဘာစီလိုနာကွင်းလယ်လူ အင်နီယေစတာက ရယူဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်မှာရော၊ ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာပါ သူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းရီးယဲလ်နဲ့ လက်ရွေးစင်အသင်းပေါ်တူဂီတို့ အောင်မြင်မှုမရတော့ အဲဒီနှစ်ဖီဖာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု (FIFA Ballon d’Or)အတွက်လည်း မျှော်လင့်ချက်ကေ၀၀ါးနေပြီး မက်ဆီကပဲ (၄)နှစ်ဆက်ရယူဖို့ ပိုရေပန်းစားလာပါတယ်။ မက်ဆီဟာ စပိန်မြေကို စီရော်နယ်လ်ဒို ရောက်ရှိလာချိန်ကစပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုတွေကို ဆက်တိုက်ရယူနေတာကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုအဖို့ ဒီဆုနဲ့ပတ်သက်လာရင် မက်ဆီကိုအတော်ကျွဲ မြီးတိုနေရပါတယ်။ စပိန်ဂျာနယ်လစ် ဒီယေဂိုတောရက်စ်ရေးသားတဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ထဲမှာတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့မော်ရင်ဟိုတို့ဟာ မက်ဆီကို “Midget” (လူပုလေး)လို့ ခေါ်ဝေါ်ကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ မက်ဆီကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိပါးစော်ကားတဲ့၊ လေးစားမှုမရှိတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ နောက်ကွယ်မှာ မကြာခဏခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုလေ့ရှိကြောင်း စပိန်သတင်းစာတွေကလည်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ မက်ဆီနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တစ်ဖက်သားကိုလေးစားမှုမရှိတဲ့၊ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပိုကြည့်တတ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် စပိန်မှာ မီဒီယာတချို့ရဲ့မျက်မုန်းကျိုးမှုကိုခံရပြီး တချို့ ဖြစ်ရပ်တွေမှာ သူ့ကိုပရိသတ်တွေအမြင်ပိုစောင်းစေမယ့်သာသာထိုးထိုးဖော်ပြမှုတွေကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ နာမည်ကျော်စပိန်သတင်းစာ Marcaရဲ့ အယ်ဒီတာအော်စကာကမ်ပီလိုက သူတို့နှစ်ဦးကို နှိုင်းယှဉ်ပြီးအခုလို ပြောပြဖူးပါတယ်။ “မက်ဆီကို လူတွေကပိုချစ်ကြပြီး သူ့ကိုတော့ဘာလို့မျက်မုန်းကျိုးနေတာလဲလို့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ကျွန်တော့်ကိုမေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ မက်ဆီက လူတွေချစ်အောင်နေတတ်လို့ပေါ့ လို့ သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်အဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး ကွင်းထဲမှာ ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ ဆာလောင်ကြတာ၊ ကိုယ့်အသင်းအောင်မြင်မှုရဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြတာ ချင်းကတူကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မတူတာကတော့ မက်ဆီက အသင်းဖော်တွေကို အမြဲတလေးတစားရှိတာပါပဲ။ သူဂိုးသွင်းပြီးရင် ဘာစီလိုနာအသင်းဖော်တွေနဲ့ အတူပွေ့ဖက်အောင်ပွဲခံသလို၊ သူ့အသင်းဖော်တွေ ဂိုးသွင်းရင်လည်း သူကပါလိုက်ပြီး တပျော်တပါး အောင်ပွဲခံတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အသင်းဖော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုရင်လည်း အမြဲဖေးဖေးမမရှိတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ပြောဆိုတတ်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုကတော့ ဒီနေရာမှာဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဂိုးသွင်းပြီးရင် သူ့ရဲ့ Muscle (ကြွက်သား) တွေကိုပြပြီး သူ့ကိုယ်သူ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားတတ်သလို၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အခြားသူတွေဂိုးသွင်းရင် သူကမကျေမချမ်းတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေရှိနေပါတယ်” လို့ အော်စကာကမ်ပီလိုက သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
အော်စကာကမ်ပီလိုသုံးသပ်တာ တကယ့်လက်တွေ့မှာလည်းအမှန်ပါပဲ။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ရဲ့ သွင်းဂိုးအချို့မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဂိုးသွင်းသူကို ဂုဏ်ပြုအောင်ပွဲခံတာမျိုးတွေပြုလုပ်လေ့မရှိသလို၊ အောင်ပွဲခံတဲ့ကစားသမားအုပ်စုထဲဝင်မရောဘဲ သူတစ်ဦးတည်းသီးခြားရှိနေတာကို ပရိသတ်တွေ မကြာမကြာတွေ့မြင်ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုကို မီဒီယာသမားအချို့နဲ့ ပရိသတ်အချို့ကစိတ်ကြီးဝင်နေသူလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ CNN သတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်သူပက်ဒရိုပင်တိုက စီရော်နယ်လ်ဒိုကို “ဒီစိတ်ကြီးဝင်တယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုခံစားရလဲ”လို့ မေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာသူဟာ စိတ်ကြီးဝင်နေသူတစ်ဦးမဟုတ်ကြောင်း စီရော်နယ်လ်ဒိုက အခုလိုပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော့်ကို စိတ်ကြီးဝင်နေတယ်လို့ ပြောနေတဲ့သူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး စကားအတူ ပြောချင်တယ်။ အဲဒီလို ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောပြီးရင် သူတို့ကျွန်တော့်ကို အမြင်မှားနေတယ်ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုစွပ်စွဲတဲ့သူတွေအနေနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအစစ်က ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ ကျွန်တော်နဲ့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက် စကားပြောဖူးဖို့တော့ လိုအပ်နေပါတယ်” လုိ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပက်ဒရိုပင်တိုက “ဒါဆိုရင်စီ ရော်နယ်လ်ဒိုအစစ်က ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ” လို့ထပ်မေးတဲ့အခါ သူက “ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ဖော်ပြရရင် ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတိုင်းအတွက် မိတ်ဆွေကောင်းပီသသူပါ။ ကျွန်တော်ကရှုံးနိမ့်မှုကို မုန်းပါတယ်။ ရိုးသားမှုကိုလက်ကိုင် ထားသူတစ်ဦးပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမဆိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆက်ဆံပါတယ်” လို့ ပြန်အဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
■ ထိန်းချုပ်သူ မန်ဒက်စ်
မီဒီယာတွေအနေနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုတွေ့ဆုံရာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူ့ရဲ့အေးဂျင့်ဖြစ်သူဂျော့ခ်ျမန်ဒက်စ်ကို ကျော်လုပ်လို့မရတာပါပဲ။ မန်ဒက်စ်ဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ပြင်ပလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် အလွန်ကိုသတိထားပြီး၊ အတိမ်းအစောင်း၊ အထိအပါးမခံဘဲကိုင်တွယ်သူပါ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ပုံရိပ်ထိပါးစေမယ့် ကိစ္စမျိုးတွေကို မန်ဒက်စ်က အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးပမ်းကာကွယ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုကိုလည်း မီဒီယာတွေနဲ့ ပတ်သက်ရာမှာ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်းမပြောဖို့ မန်ဒက်စ်က အမြဲထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ပုံရိပ်ကောင်းမွန်မှုက ကာယကံရှင်ဖြစ်သူ အတွက်ရော၊ သူ့အတွက်ပါ ပေါင်သန်းချီတန်တဲ့ ငွေကြေးဖြစ်တယ်ဆိုတာ အတွေ့အကြုံရင့် စူပါအေးဂျင့်မန်ဒက်စ်က ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နေပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာတစ်ဦးချင်းထူးချွန်ဆုတွေ ဆွတ်ခူးရရှိဖို့ဖြစ်စေ၊ ငွေကြေးကိန်းဂဏန်းများစွာတန်ကြေးရှိတဲ့ စီးပွားရေးစပွန်ဆာစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုဖို့ဖြစ်စေ ဒါတွေအတွက်အဓိကအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာက စီရော်နယ်လ်ဒိုအပေါ် လူတွေအကောင်းမြင်နေဖို့နဲ့ သူ့ရဲ့ပုံရိပ်လှပနေစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မီဒီယာတွေနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုတိုက်ရိုက်မတွေ့နိုင်အောင် မန်ဒက်စ်ကနည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းလေ့ရှိပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်အသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် မီဒီယာတွေကို သူ့ဖုန်းနံပါတ်မပေးတဲ့ ပထမဆုံးအသင်းခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို မန်ဒက်စ်ကထိန်းချုပ်ထားတာတောင် ကိုယ်ရည်သွေးလွန်းချင်တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့စကားတွေက သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာ မကြာခဏပါဝင်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီစကားတွေထဲက အချို့ကိုပြန်ပြီး ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် . . .
“ကျွန်တော်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယအကောင်းဆုံးကစားသမားပါ” (OEstado de Sao Paulo သသတင်းစာနှင့် အင်တာဗျူး၊ ၂၀၀၈)
“ကမ္ဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်လာတာကို ကျွန်တော်အလွန်ပဲပျော်ရွှင်ပါတယ်” (ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနှင့် မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲ၊ ၂၀၀၉)
“ကျွန်တော်က မက်ဆီထက်ပိုကောင်းတဲ့ ကစားသမားလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကျွန်တော်ဖြေစရာမလိုပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ဒါကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်” (Antena3ရုပ်သံနှင့် အင်တာဗျူး၊ ၂၀၁၁)
“ကွင်းထဲမှာ ကျွန်တော့်ကို မက်ဆီ၊ မက်ဆီလို့ အော်ဟစ်လှောင်ပြောင်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ စီရော်နယ်လ်ဒို ဘောလုံးကစားတာကို အားလုံးကတွေ့မြင်ချင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်” (ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနှင့် မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲ၊ ၂၀၁၁)
“ကျွန်တော့်ရဲ့အလုပ် (ဘောလုံးကစားခြင်း) မှာ ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အမြဲအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာလည်း ကျွန်တော်က အကောင်းဆုံးဆိုတာ အမြဲတွေးထားပါတယ်” (AS သတင်းစာနှင့် အင်တာဗျူး၊ ၂၀၁၄)
“ကျွန်တော် မက်ဆီတစ်ဦးတည်းနဲ့သာ ယှဉ်ပြိုင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပရီးမီးယားလိဂ် အပါအ၀င်ထိပ်တန်းလိဂ်တွေက အကောင်းဆုံးကစားသမားအားလုံးနဲ့ ကျွန်တော်ယှဉ်ပြိုင်နေပါတယ်။ ဆွာရက်ဇ်၊ အင်နီယေစတာ၊ နေမာ၊ ဘေးလ်၊ ဒီယေဂိုကော်စတာ၊ ဖယ်လ်ကာအိုအစရှိတဲ့ကစားသမားတွေပေါ့။ ဒီယှဉ်ပြိုင်မှုတွေက ကျွန်တော့်ကို ပိုပြီးတိုးတက်လာစေပါတယ်”(TVI ရုပ်သံနှင့်အင်တာဗျူး၊ ၂၀၁၄)
■ အခန်း (၇)
■ ရီးယဲလ်မှ နိမ့်မြင့်တက်ကျများ
၂၀၁၂ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ကနေ စီရော်နယ်လ်ဒိုထွက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေက ဥရောပဘောလုံးလောကမှာ လှိုင်လှိုင်ကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ရီးယဲလ်(၃-၀)ဂရန်နာဒါပွဲအပြီး ရီးယဲလ်မှာသူမပျော်တော့ဘူးလို့ အတိအလင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားကြောင့်လည်း စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဥရောပမှာအသင်းကြီးတစ်သင်း ဖြစ်လာအောင် ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ပြင်သစ်ကလပ် မိုနာကိုအသင်းက စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ခေါ်ယူဖို့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မိုနာကိုအသင်းဘောလုံး ဒါရိုက်တာကာလ်ဆန်ဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အေးဂျင့်ဂျော့ခ်ျမန်ဒက်စ်နဲ့ ညစာအတူစားကာ အပြောင်းအရွှေ့အတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ မန်ဒက်စ်ဟာ မိုနာကိုအသင်းကို ကာဗယ်လ်ဟို၊ ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွက်ဇ်၊ ဖယ်လ်ကာအို အစရှိတဲ့ နာမည်ကြီးဘောလုံးသမားတွေ ရောက်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့သူပါ။ အဲဒီနောက် မိုနာကိုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၂၊ ဒီဇင်ဘာလမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ်-အက်စ်ပန်ညိုပွှဲအပြီး မန်ဒက်စ်၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ဒီစာအုပ်ရေးသားသူ စာရေးဆရာ ဂွယ်လ်လမ်ဘာလယ်ဂွယ်တို့ ဘာနေဗျူးကွင်းနားက စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ညစာစားရင်းဆွေး နွေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ ရီးယဲလ်မှာ မပျော်ရွှင်ဘူးလို့ပြောရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ အသင်းထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေက သူ့အပေါ်အလေးအနက်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ ယူဆတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်း သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂၊ သြဂုတ်လအတွင်း ဥရောပအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု (UEFA Best Player In Europe Award) ကို ချီးမြှင့်ရာမှာ ဘာစီလိုနာကွင်းလယ်လူအင်နီယေစတာက မက်ဆီနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ကိုကျော်ဖြတ်ကာ ရယူဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို မိုနာကိုက မွန်တီကာလိုမှာ ကျင်းပခဲ့ရာမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းဥက္ကဋ္ဌရော့ဆဲလ်၊ အသင်းအားကစား ဒါရိုက်တာဇူဘီဇာရက်တာတို့ တက်ရောက်ပြီး ဘာစီလိုနာကစားသမား အင်နီယေစတာနဲ့ မက်ဆီ တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ၀န်းရံပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းမှာတော့ အသင်းဒုဥက္ကဋ္ဌတွေထဲမှာ သိပ်ပြီးထင်ရှားခြင်းမရှိဘဲ တတိယအဆင့်လောက်သာရှိတဲ့ ပက်ဒရိုလိုပက်ဇ်နဲ့ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဘူထရာဂွယ်နိုတို့သာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဒီဆုပေးပွဲမှာ မက်ဆီနဲ့ပူးတွဲဒုတိယအကောင်းဆုံးဆုသာရတာဖြစ်ပေမယ့် အသင်းဥက္ကဋ္ဌပီရက်ဇ်နဲ့ အသင်းထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတချို့ဟာ သူ့ကိုဝန်းရံမှုမရှိဘူးလို့ မှတ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ပီရက်ဇ်ဟာ အဲဒီအချိန်တုန်းက သူ့ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ ACS မှာ အစည်းအဝေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဒီဆုပေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ ပီရက်ဇ်ရဲ့လျစ်လျူ ရှုမှုအပေါ် အတော့်ကိုစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ ပီရက်ဇ်ဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို အမြဲမျက်နှာသာပေး၊ အလေးပေးဆက်ဆံခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒီလိုပီရက်ဇ်ရဲ့ မျက်နှာလွှဲမှုကိုခံရတဲ့အချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာအသင်းမှာမပျော်တော့ဘူးလို့ မီဒီယာတွေကို လေသံပစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ မီဒီယာတွေကိုလေသံပစ်ခဲ့ရုံမက ပီရက်ဇ်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး အသင်းမှာ သူမပျော်ဘူးဆိုတာ အတိအလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပီရက်ဇ်ကို နှစ်ဦးတည်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တာက ဥရောပအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုပေးပွဲအပြီး နောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ ဂါနာကွင်းလယ်လူအက်ဆီယန်ကို ချယ်လ်ဆီးအသင်းကနေ အငှားစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူပြီး မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်နေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာနေဗျူးကွင်းကိုရောက်နေတဲ့ ပီရက်ဇ်ကို ကွင်းထဲက ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းမှာ တွေ့ချင်တယ်လို့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက အသင်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကတစ်ဆင့်တွေ့ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ပီရက်ဇ်ရဲ့ရုံးခန်းကို စီရော်နယ်လ်ဒိုရောက်ရှိလာပြီး သူတို့နှစ်ဦးထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံတဲ့အခါပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ၂၀၁၂၊ ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့ထုတ် Marca သတင်းစာက အခုလိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒို – ဥက္ကဋ္ဌကို ကျွန်တော်ပြောစရာရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီအသင်းမှာမပျော်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် ဒီအသင်းကထွက်ချင်နေပါပြီ။
ပီရက်ဇ် – မင်းထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် ထွက်လေ။ ဒါပေမဲ့ မက်ဆီကိုပြန်ခေါ်ဖို့ ငါ့ကိုငွေပေးပြီးမှထွက်လို့ရမယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒို – ငွေရေးကြေးရေးက ပြဿနာမရှိပါ ဘူး။ ကျွန်တော် မနက်ဖြန် ယူရိုသန်း(၁၀၀)ယူပြီး ပြန်လာခဲ့မယ်။
ပီရက်ဇ် – သန်း(၁၀၀)နဲ့မရဘူး။ မင်းရဲ့စာချုပ်မှာပါတဲ့ အသင်းကထွက်ခွင့်လျော်ကြေး Release-Clause က ယူရိုတစ်ဘီလီယံ (ယူရိုသန်း ၁၀၀၀) . . . ခရစ္စတီယာနို။
Marca သတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ စကားတွေအရ ပီရက်ဇ်ဟာအသင်းက စီရော်နယ်လ်ဒိုထွက်သွားမှာကို သိပ်ပြီးမပူပန်တဲ့ပုံရှိနေပါတယ်။ အသင်းက ထွက်ခွင့်လျော်ကြေးကို အဆမတန်မြှင့်တင်ထားလို့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ အသင်းကထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင် လွယ်လွယ်ကူကူထွက်ခွင့်မရဘဲ ဒီလျော်ကြေးပမာဏက သူ့ကိုချည်ပြီးတုပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ စီးပွားရေးလောကမှာ အောင်မြင်မှုများစွာရရှိနေတဲ့ ပီရက်ဇ်ကကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်ထားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက မိုနာကိုအပြင် မန်စီးတီး၊ PSG အစရှိတဲ့ အသင်းကြီးတွေကလည်း စီရော်နယ်လ်ဒိုကိုခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသလို သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်း မန်ယူကလည်း ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရိုသန်း(၁၀၀)ကျော်နဲ့ သူ့ကို ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဟာ ဥက္ကဋ္ဌပီရက်ဇ်ရဲ့အကွက်ရွှေ့မှုတွေကြောင့် အပြောလွယ်သလောက် လက်တွေ့မှာခက်ခဲခဲ့ပါတယ် . . .
Posted in Article, SportTagged စီရော်နယ်လ်ဒိုLeaveaComment on ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၂၇)
အိပ်မက်၊ မျှော်လင့်ချက်၊ စစ်ပွဲနဲ့ ဆီးရီးယားရဲ့ ရွှေရည်စိမ်ပျော်ရွှင်ခြင်းလား
Posted on October 7, 2017 October 7, 2017 by Eleven Media Group
အားကစားခန်းမရဲ့နံရံဟာ အနီးအနားက ဗုံးပေါက်ကွဲသံကြောင့် တုန်ခါသွားပါတယ်။ ကျယ်လောင်ပြင်းရှတဲ့ ဗုံးပေါက်သံကြားမှာပဲ ကလေးငယ် (၂၀၀)ပါဝင်တဲ့ တိုက်ကွမ်ဒိုပြိုင်ပွဲတစ်ခု ကျင်းပနေရတယ်။
ဒါဟာ (၆)နှစ်ကြာပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ကို ငရဲလိုခံစားနေရတဲ့ ဆီးရီးယားရဲ့ အားကစားပန်းချီကားတစ်ချပ်ပါပဲ။ ရွှေတံဆိပ်ဆွတ်ခူးနိုင်ရေးအတွက် ကလေးငယ်တွေ ကြိုးစားနေသလို၊ အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း စစ်ဒဏ်ကြောင့် အသက်မဆုံးရှုံးရအောင် သူတို့ဘ၀တွေကို ကာကွယ်နေ ရပါတယ်။
” အားကစားခန်းမထဲမှာ ဗုံးအန္တရာယ် ဒဏ်ကာကွယ်တဲ့နေရာများစွာရှိပါတယ်။ အား ကစားခန်းမတွေဆီကို ဗုံးတွေရောက်လာပြီးရင် အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ နောက်ထပ်ပစ်မှတ်က ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေဆီကိုပါပဲ” လို့ ဆီးရီးယား အိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဂျိုးမားက ပြောပါတယ်။ ဆီးရီးယားရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀တွေဟာ ပျော်ရွှင်စရာမရှိ ပါဘူး။ အပျင်းပြေစကားစမည်ပြောစရာအကြောင်း အရာလည်း ရှားပါးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆီးရီးယား ပြည်သူတွေမှာ ပြောစရာရှိလာပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ စစ် ဒဏ်ကြားက လူးလွန့်တိုးထွက်လာတဲ့ ဆီးရီုးယား ဘောလုံးအသင်း ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ အောင်မလားဆိုတာပါပဲ။ ကြာသပတေးနေ့မှာ သြ စတြေးလျနဲ့ Play-off ပထမအကျော့ကစားရ မယ်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်း ဆီးရီးယားအသင်း အိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးမယ် မထင်ပါဘူး။ဘောလုံးရဲ့ ပါဝါနဲ့အတူ သူတို့တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းမှာ မျှော်လင့် ချက် ကိုယ်စီမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပြီလား။
ဆီးရီးယားနဲ့ မိုင်ပေါင်း (၄၅၀၀)ကျော်ဝေး တဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့တောင်ပိုင်း က ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ဟိုတယ်မှာ ဆီးရီးယား ဘောလုံးသမားတွေ Check-in လုပ်နေပါတယ်။ သူတို့ထဲက တချို့ဟာ ရီးယဲလ်နည်းပြ ဇီဒန်းနဲ့ စီ ရော်နယ်လ်ဒိုတို့အကြောင်း အားရပါးရပြောနေ ကြတယ်။ တချို့က မိုဘိုင်းဖုန်းကိုယ်စီသုံးရင်း ငြိမ် သက်နေပါတယ်။ မလေးရှားကို ဆီးရီးယားအသင်း ရောက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းက ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖ လားခြေစစ်ပွဲကစားဖို့ပါပဲ။ စစ်ဒဏ်ကြားက ကြေမွ နေတဲ့ ဆီးရီးယားမြို့တော် ဒမက်စကတ်ဟာ လုံ ခြုံရေးအရ အိမ်ကွင်းလက်ခံကစားခွင့်မရပါဘူး။ ဒီတော့ ဆီးရီးယားအသင်းရဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေကို မလေးရှားမှာ ကစားခဲ့ရပါ တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာ (၆)ရက်ကို ဆီးရီးယားကစားသမားတွေ အမှတ်ရနေပါဦးမယ်။ အဲဒီတုန်းက သူတို့အသင်းဟာ လူဦးရေ (၁ .၄)ဘီလီယံရှိပြီး ဘောလုံးအောင်မြင်မှုအသည်းအသန် လိုချင်လို့ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအကုန်အကျ ခံ လုံးပန်းနေတဲ့ တရုတ်အသင်းကို အဝေးကွင်း ဘေဂျင်းမှာ (၁-၀)ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာပါပဲ။ တရုတ် ကိုအနိုင်ရခဲ့လို့ ဆီးရီးယားကစားသမားတွေ တစ် ဦးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀၀၀)စီ ဆုကြေးရခဲ့ ပါတယ်။ ဒီဆုကြေးပမာဏဟာ ဆီးရီးယားဘော လုံးသမားတစ်ဦးရဲ့တစ်နှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေနီးပါးရှိခဲ့ လို့ လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ပါဝင်ခြေစွမ်းပြခွင့်ရ ရေးဟာ ဆီးရီးယားဘောလုံးသမားတစ်ဦးအတွက် မက်လောက်စရာအိပ်မက်ပါပဲ။ စစ်ငွေ့မပြယ်သေး တဲ့နိုင်ငံတစ်ခု၊ လူဦးရေ (၂၃)သန်းထဲမှာ လူဦးရေ (၅)သန်းနီးပါး ဒုက္ခသည်ဘ၀ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခုရဲ့ဘောလုံးအရွေ့ကို ဘယ်သူဦးဆောင်ခဲ့လဲ။
တကယ်ဆို ဆီးရီးယားမှာ ဘောလုံးသမား ဖြစ်ရတာမလွယ်ကူပါဘူး။ အာဆတ်အစိုးရလက် အောက်ခံတွေဟာ အရင်တုန်းက ဘောလုံးသမား တချို့ကို ဖမ်းဆီး၊ ထောင်ချတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အလက်ပိုအခြေစိုက်အားကစားကလောင်ရှင် အာ နက်စ်အမ်မိုက အာဆတ်အစိုးရဟာ ဘောလုံးသ မားတွေကို လူမသိသူမသိအပြတ်ရှင်းခဲ့တယ်လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဆီးရီးယားဘောလုံးသမား အ နည်းဆုံး (၃၈)ဦးဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အ သတ်ခံခဲ့ရပြီး ကစားသမား(၃၀)ဦးလောက်ဟာ ပျောက်ဆုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဆီးရီး ယားကစားသမားဟောင်း ဂျက်ဘာအယ်ကာဒီက အခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားပြီး (၂)နှစ်အကြာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသူပါပဲ။
”ကျွန်တော့်ခြေ ထောက်တွေကို ရာဘာပိုက်လုံးနဲ့ ထပ်တလဲလဲ ရိုက်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းကို ၀ိုင်ယာကြိုးနဲ့ ရှော့ခ်ရိုက် ပါတယ်”လို့ ဂျက်ဘာအယ်ကာဒီက နာကျင်စရာအ တိတ်ကိုပြန်ပြောပြတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ဂျက်ဘာအယ်ကာဒီဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ ခိုလှုံနေပေမယ့် နာကျင်စရာအတိတ်ဟာ ညအိပ်မက်ဆိုးတွေအ ဖြစ် သူ့ဆီရောက်လာနေတုန်းပါပဲ။ ဆီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ဟွမ်းစ်မြို့က လက်ရွေးစင်အသင်း ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကွာဆက်ဘ်ဆိုရင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက ပျောက်သွားတာ အခုအချိန်အထိ သတင်းအစအနမကြားရပါဘူး။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက် တင်ဘာမှာ ကွာဆက်ဘ်သေပြီဆိုတဲ့အတည်မပြု နိုင်တဲ့သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့သလို၊ သူ့သူငယ် ချင်းတချို့ကတော့ ကွာဆက်ဘ် အသက်ရှင်နေ သေးတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆီးရီးယားလူ့အခွင့် အရေးကွန်ရက်ရဲ့ မှတ်တမ်းတွေအရ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ မတ်လကနေ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း အားကစားသမား (၂၆၄)ဦး အသတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ ဒီထဲမှာ ထိပ်တန်းဘောလုံးသမား (၃၈)ဦး ပါဝင်နေပါတယ်။ ဘောလုံးသမားတွေဟာ ဆီးရီး ယားအစိုးရ(ဒါမှမဟုတ်) အီရန်ပြည်သူတပ်တွေ ရဲ့လက်ချက်နဲ့ အပြစ်မဲ့သေဆုံးခဲ့ရတာပါပဲ။ အစ္စ လာမ်မစ်စစ်သွေးကြွတွေ၊ ရုရှားအကူစစ်တပ်တွေ၊ တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့် အားကစားသမားသေဆုံးမှုနှုန်း မြင့်တက်နေတယ် လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် အများစုဟာ ဆီးရီးယားအစိုးရ ရဲ့ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခြင်း ကြောင့်ပါပဲ။ ဘောလုံးသမားအများစုဟာ အာ ဆတ်အစိုးရကို ပုန်ကန်အကြမ်းဖက်ဖို့ ကြိုးပမ်း တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်။ ကွာဆက်ဘ်ဆိုရင် ကားဗုံးထောင်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ မတရားထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာပါပဲ။ အာဆတ်အစိုးရဟာ အမေရိကန်အပါအ၀င် အ နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးအရဖိအား ပေးရှုတ်ချခံနေရတာတွေကို ဖုံးအုပ်ချင်လာချိန် မှာ ဘောလုံးကို နိုင်ငံမျက်နှာဖုံးအဖြစ် ပြောင်းလဲ ခဲ့ပါတယ်။ အာဆတ်ဟာ ဆီးရီးယားဘောလုံးအ သိုင်းအ၀ိုင်းကို မြေတောင်မြှောက်ပေးပြီး စစ် ကြောင့် ကွယ်ပျောက်နေတဲ့ သူတို့ရဲ့ အငုံ့စိတ်ကို ဘောလုံးမှာ သွန်ချနိုင်အောင် မြူဆွယ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမလားပဲ။
ဆီးရီးယားအသင်းမှာ မကစားချင်ဘူး လို့ နှစ်များစွာအကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆန်ခဲ့သူ ကာတစ်ဘ် ဟာ ဆီးရီးယားရဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားရွှေအိုရောင် ခရီးစဉ်မှာ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် အမှုတော် ထမ်းနေပါပြီ။ ကာတစ်ဘ်ဟာ အာဆတ်အစိုးရကို ခါးသီးလွန်းခဲ့ပြီး အားကစားသမားတွေ အပြစ်မဲ့ဖမ်း ဆီးထိန်းသိမ်းခံရ၊ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာတွေကြောင့် လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ကစားဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့သူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းမှာ ESPN ကို သူပြောခဲ့တာက ” အခုဆိုရင် ဆီးရီးယားမှာ လူ သတ်သမားတွေ ပေါများနေပါပြီ။ တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်မကတော့ပါဘူး။ သူတို့အားလုံးကို ကျွန်တော်မုန်းပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဆီး ရီးယားပြည်သူ (၁၂)သန်းက ကျွန်တော့်ကို ချစ်ပါ လိမ့်မယ်။ ကျန်တဲ့ (၁၂)သန်းက ကျွန်တော့်ကို မုန်းနေပါလိမ့်မယ်” ဆိုတာပါပဲ။
အာဆတ်ဟာ သူ့ ရဲ့ ပုံရိပ်ဆိုးကို ဘောလုံးနဲ့အတူ သန့်စင်ဖို့ကြိုးစား နေပါတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက သူ့ကိုမုန်းတီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးအသိုင်းအ၀ိုင်းကလူတွေဟာ သူ့ဘက် တော်သားတွေ ဖြစ်လာအောင် သိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပါ တယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက ဆီးရီးယားအသင်းသား တွေဟာ ‘ရယ်ပြုံးနေသော သမ္မတအာဆတ်ရုပ်ပုံ ပါတီရှပ်’ ကို ၀တ်ဆင်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆီးရီးယားအသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာ လည်း အာဆတ်ရုပ်ပုံတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီးအားပေး တာမျိုး တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
” လက်ရွေးစင်ပွဲကစားတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုရတာ အရမ်း သဘောကျမိပါတယ်။ ဘောလုံးဟာနိုင်ငံရေးအတွက်အရမ်းအရေးပါတယ်။ ဆီးရီးယားရဲ့ ပုံရိပ် အစစ်အမှန်ကို ဒီမှာရှာတွေ့နိုင်တယ်။ စစ်ဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေရပေမယ့် ဆီးရီးယား ရှိနေသေး တယ်ဆိုတာကို ဘောလုံးနဲ့အတူ ပြသနိုင်တယ်။ ဘောလုံးကိုအသုံးပြုပြီး ဆီးရီးယားပြည်သူတွေကို ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကူညီနေတာပါပဲလို့ ဆီးရီးယားလက်ရွေးစင် ကူတိုင်ဘာက ပြောခဲ့ပါ တယ်။ ငွေကြေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ထက် ပိုတယ်လို့ ကူတိုင်ဘာ ယူဆနေတယ်။ စစ်ပွဲမတိုင် မီ ဆီးရီးယားပြည်သူတွေ စုစည်းညီညာခဲ့သလိုမျိုး ပြန်ဖြစ်အောင် ဘောလုံးဟာ ချစ်ခြင်းကို ဆောင်ယူလာမယ့် ကြားခံကိရိယာ တစ်ခုလို့ ကူတိုင်ဘာ ယုံကြည်နေပုံ ပါပဲ။
ဆီးရီးယား အသင်းခေါင်းဆောင် ကာတစ်ဘ် (Photo: AFP)
ဆီးရီးယားဘောလုံးအသင်းဟာ (၆)နှစ် ကျော်ကြာ ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်း ဆီးရီးယား ပြည်သူတွေကြား သွေးစည်းစေမယ့်အရာလို့ တကယ်ဆိုနိုင်ပြီလား။ ဆီးရီးယားလက်ထောက် နည်းပြ ဂျက်ဘန်းဟာ တစ်လကို အမေရိကန်ဒေါ် လာ(၁၀၀)လောက်ပဲရပေမယ့် သူ့အသင်းအပေါ် ချစ်မြတ်နိုးစိတ် တစ်စက်မှလျော့မနေပါဘူး။ သူ ဟာ ဆီးရီးယားအသင်းအတွက် ပွဲ(၁၀၀)ကျော် ကစားခဲ့ဖူးပြီး ၁၉၉၄ AFC လူငယ်ချန်ပီယံရှစ်မှာ ဂျပန်ကို အနိုင်ယူပြီး ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ ဆီးရီးယားကစား သမားဟောင်းတစ်ဦးပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက ဒမက်စ ကတ်မြို့လေဆိပ်မှာ ဆီးရီးယားပြည်သူတွေ သူ့ကို ပခုံးပေါ်ထမ်းတင်ပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့တာကို သူ မမေ့သေး ဘူး။ သူ့ရဲ့လက်ရှိဆီးရီးယားအသင်းကို လျှပ်စစ် မီးမရတဲ့ညဘက်တွေမှာ ဘတ္ထရီသုံးပြီး ခပ်သေး သေးတီဗွီကနေ သူ့ဇနီးနဲ့သမီး(၄)ယောက်က အား ပေးနေပါလိမ့်မယ်။ ဂျက်ဘန်းပြန်လာမယ့်နေ့ဆို သူ့သမီးတွေက ချောကလက်ကိတ်မုန့်လုပ်ရင်း မျှော်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမျှော်လင့်ချက်တွေ ရဲ့ ဆန့်ကျက်ဘက်မှာ နိုင်ငံအသီးသီးကို လွင့်စင် ထွက်သွားတဲ့ ဆီးရီးယားပြည်သူတွေရဲ့ ကျိုးပဲ့မျှော် လင့်ချက်ရှိနေပါတယ်။ အားကစားကလောင်ရှင် အာနက်စ်အမ်မိုက ဆီးရီးယားကစားသမားတချို့ ဟာ အကြောက်တရားတွေကြီးစိုးခံထားရပြီး ဘော လုံးကောင်းကောင်းမကစားရင် ဆီးရီးယားမှာကျန် ခဲ့မယ့် မိသားစု၊ ဆွေမျိုးတွေ ရန်ရှာခံရမှာကို စိုးရိမ် နေပုံပဲလို့ သုံးသပ်တယ်။ ကစားသမားတွေရဲ့ ပတ်စ်ပို့တ်ကို အစိုးရက ထိန်းသိမ်းတာမျိုးလည်း ရှိပါ တယ်။ အောင်မြင်တဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် စစ်ပွဲကြောင့် ဆီးရီးယားရဲ့အ ဝေးကိုလွင့်စင်ထွက်သွားသူတွေ၊ ဆီးရီးယားအသင်း ကို နှလုံးသားနဲ့ရင်းပြီး မြတ်နိုးခဲ့သူတွေဟာ လက်ရှိ ဆီးရီးယားရဲ့အောင်မြင်မှုကို အလုံးစုံမနှစ်သက် ပါဘူး။
ဒါဟာ ဆီးရီးယားအသင်းအစစ်အမှန်လို့ ကျွန်တော်မယူဆပါဘူး။ အာဆတ်ကိုယ်စားပြုအ သင်းပါပဲ။ ဘောလုံးအသင်းဆိုတာ နိုင်ငံရေးကိုယ် စားပြုမဟုတ်ဘူး။ လူထုကို ကိုယ်စားပြုရပါမယ်။
ဒီစကားက တူရကီမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံနေသူ
Posted in Article, SportLeaveaComment on အိပ်မက်၊ မျှော်လင့်ချက်၊ စစ်ပွဲနဲ့ ဆီးရီးယားရဲ့ ရွှေရည်စိမ်ပျော်ရွှင်ခြင်းလား
■ ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၂၂)
Posted on October 2, 2017 October 5, 2017 by Eleven Media Group
■ ရီးယဲလ် ပထမဆုံးရာသီ
စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ရီးယဲလ်ပထမဆုံးရာသီဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီကတော့ အားမရစရာတွေနဲ့ပဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ရာသီကြိုမှာပြင်ဆင်မှုတွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် လာလီဂါမှာ ဘာစီလိုနာကို မကျော်နိုင်ခဲ့ဘဲ ရမှတ် (၃)မှတ်အကွာနဲ့ ဒုတိယနေရာမှာသာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စပိန်ဘုရင့်ဖလားမှာလည်း စစကစားချင်းရှုံးထွက် (၃၂)သင်းအဆင့်မှာပဲ အသင်းငယ်လေးဖြစ်တဲ့ အယ်လ်ကော်ကွန်ကို ပထမအကျော့မှာ (၀-၄)ဂိုးနဲ့ရှုံး၊ ဒုတိယအကျော့မှာ (၁-၀)ဂိုးနဲ့သာ နိုင်တာကြောင့် ပြိုင်ပွဲကစောစောစီးစီး ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ရီးယဲလ် ဥက္ကဋ္ဌပီရက်ဇ်အနေနဲ့ ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကတည်းကဝေးကွာနေတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကိုပြန်လည်ရယူဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြပြီး စီရော်နယ်လ်ဒို၊ ကာကာ၊ ဘန်ဇီမာတို့လို ကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် အဲဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ်မှာ ရှုံးထွက် (၁၆)သင်းအဆင့်ကပဲ ထွက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာရှုံးထွက် (၁၆)သင်းအဆင့်ကနေ ဆက်တိုက်ထွက်ခွာရမှုကို မရပ်တန့်နိုင်ဘဲ (၆)ရာသီဆက်ဒီအဆင့်နဲပဲ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇-၀၈၊ ၂၀၀၈-၀၉ ဘောလုံးရာသီတွေမှာ မန်ယူအသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲတွေနွှဲခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ဒီလိုပြိုင်ပွဲကစောစောစီးစီးထွက်ရတာဟာ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ငွေသန်းပေါင်းများစွာအသုံးပြုပြီး အားဖြည့်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် လာလီဂါ (အဆင့် ၂)၊ စပိန်ဘုရင့်ဖလား (ရှုံးထွက် ၃၂ သင်းအဆင့်)၊ ချန်ပီယံလိဂ် (ရှုံးထွက် ၁၆ သင်း အဆင့်) တွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈-၀၉ ဘောလုံးရာသီရပ်တည်မှုအတိုင်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တစ်ထပ်တည်းရပ်တည်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈-၀၉ ရာသီကမှ ရာသီကြိုစပိန်စူပါဖလား (၁)လုံးရခဲ့ပြီး၊ ဒီရာသီမှာတော့ ဘာဖလားမှမရယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဒီရာသီမှာ ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် လိဂ်ဂိုး (၂၉)ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲစုံမှာတော့ အများဆုံးသွင်းသူအဖြစ် (၃၃)ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရီးယဲလ်ပွဲဦးထွက်ရာသီက သူ့အတွက် ကျေနပ်စရာရာသီတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာလအတွင်းကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုပွဲစဉ် မာဆေးလ်နဲ့ပွဲမှာ ညာဖက်ခြေချင်းဝတ်ကို အကန်ခံရတာကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမယ့် အနားမယူဘဲ အသင်းမှာဆက်ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက် (၁၁)ရက်အကြာ ပေါ်တူဂီ-ဟန်ဂေရီပွဲမှာတော့ သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာက ယောင်ကိုင်းလာပြီး အတော်ကိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်လခွဲလောက်ဘောလုံးကစားခြင်းက အနားယူကုသခဲ့ရပါတယ်။ ဘောလုံးအမြဲကစားချင်တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ဒီအနားယူရတဲ့ကာလဟာ တစ်ကမ္ဘာလောက်ကြာမြင့်ခဲပြီး သူ့ရဲ့ကစားသမားဘ၀အချိန် အကြာဆုံးအနားယူရတဲ့ ကာလတွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ်ရာသက်သာလာပြီး ပြန်ကစားနိုင်ချိန်မှာ သူ့အတွက် ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာသက်သာလာပေမယ့် သူ့အနေနဲ့အသင်းမှာကစားရတာ လမိုင်းမကပ်ဘဲ ကောင်းကောင်းမကစားနိုင်ခဲ့သလို ၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကစားခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ် ၄-၂ အယ်လ်မီရီယာပွဲမှာ ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးအနီကတ်နဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒိုင်လူကြီးက သူ့ကို (၂)၀ါ၊ (၁)နီပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီအ၀ါကတ် (၂)ခုက (၃)မိနစ်သာ ခြားနားခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန် (၈၄)မိနစ်မှာ အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့လို့ အပျော်လွန်ပြီး အင်္ကျီချွတ်အောင်ပွဲခံခဲ့တာကြောင့် ပထမ (၁)၀ါထိခဲ့ပြီး၊ နောက် (၃)မိနစ်အကြာမှာ ပြိုင်ဘက်အယ်လ်မီရီယာကစားသမားကို အသားလွတ်ခြေထောက်နဲ့ ကန်ခဲ့လို့ နောက်(၁)၀ါအပြခံရပြီး အထုတ်ခံရတာပါ။
စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ရီးယဲလ်ပထမဆုံးရာသီက သူ့ရဲ့စည်းကမ်းပိုင်းမှတ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနီထိပြီး နောက်တစ်လခွဲအကြာ ၂၀၁၀၊ ဇန်န၀ါရီလအတွင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ နောက်ထပ်အနီကတ်တစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအနီကတ်ကတော့ တိုက်ရိုက်အနီဖြစ်ပါတယ်။ ရီးယဲလ် (၂-၀)မာလာဂါပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အသင်းအတွက် အနိုင်ဂိုး (၂)ဂိုးစလုံးကို သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပွဲချိန်မိနစ် (၇၀)မှာ မာလာဂါနောက်ခံလူ ပတ်ထရစ်အမ်တီလီဂါကို တံတောင်နဲ့ရိုက်ခဲ့တာကြောင့် တိုက်ရိုက်အနီကတ်ပြခံခဲ့ရတာပါ။ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ဒိန်းမတ်နောက်ခံလူအမ်တီလီဂါဟာ နှာခေါင်းရိုးကျိုးသွားခဲ့ပြီး သွေးတွေအများကြီးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်ကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ (၂)ပွဲပယ်ပြစ် ဒဏ်ကျခံခဲ့ရပါတယ်။
■ ချန်ပီယံလိဂ် အရှုံးဒေါသ
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ၂၀၀၉-၁၀ ဘောလုံးရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရတာကြောင့် အလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ဒေါသဟာ ရက်တော်တော်ကြာမပြီးဆုံးနိုင်ဘူးဆိုတာ ရီးယဲလ်ဂိုးသမားဟောင်း ဒူးဒက်ကသူ့ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်မှာ ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကထွက်အပြီး နောက်နေ့တွေမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းထဲ ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းမရှိဘဲ သုန်မှုန်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကို ကစားသမားတွေရဲ့ မိသားစုတွေ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေခေါ်ခွင့်ပေးတာကြောင့် ဒူးဒက်ဟာသူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းဂျာမန်လက်ဝှေ့သမား မိုက်ကယ်ဇောစကီးကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းထဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ရီးယဲလ်ပရိသတ်ကလေးငယ်တွေက စောင့်ဆိုင်းနေပြီး သူလေ့ကျင့်ပြီးချိန်မှာ ဓာတ်ပုံအတူရိုက်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ” No Photo,No Photo ” လို့ပြောပြီး ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဆန္ဒကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့လုပ်ရပ်က ပရိသတ်တွေရှေ့ရိုင်းသလိုဖြစ်နေလို့ ဒူးဒက်က၀င်ရောက်ထိန်းသိမ်းရာမှာ အခြေအနေကပိုဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ” ငါဒီကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လာတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘောလုံးကစားဖို့လာတာ “လို့ ဒူးဒက်ကို မချေမငံပြောခဲ့တာကြောင့် ဒူးဒက်ရဲ့သူငယ်ချင်း မိုက်ကယ်ဇောစကီးလည်း စီရော်နယ်လ်ဒိုကို အတော်ဒေါသထွက်သွားပါတယ်။ မိုက်ကယ်ဇောစကီးက ဒူးဒက်ကို ” ငါသူ့ကို လက်သီးစာကောင်းကောင်းကျွေးလိုက်ချင်တယ် ” လို့ပြောခဲ့ကြောင်းဒူးဒက်က သူ့ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်မှာ ရေးသားခဲ့တာပါ။
အဲဒီ ၂၀၀၉-၁၀ ဘောလုံးရာသီမှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ ရမှတ် (၉၃)မှတ်အထိရခဲ့ပြီး ဒါဟာ (၃၈)ပွဲကစားတဲ့ လာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက်အများဆုံးရမှတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာစီလိုနာက (၉၆)မှတ်အထိရယူပြီး လာလီဂါချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့လည်း ပြိုင်ပွဲစုံ (၃၅)ပွဲမှာ (၃၃) ဂိုးသွင်းနိုင်တာကြောင့် သူ့ရဲ့တစ်ပွဲပျမ်းမျှသွင်းဂိုးက (၀ .၉၅)ဂိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာ ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးအတွက်ဆိုရင်တောင် ကျေနပ်စရာကိန်းဂဏန်းတစ်ခုပါ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူ့ရဲ့သွင်းဂိုးတွေကို နေရာမျိုးစုံကနေပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ သွင်းယူခဲ့ပြီး အဝေးကန်ဂိုးတွေ၊ ဖရီးကစ်ဂိုးတွေလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖလားလက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီရာသီအတွက် ပေးဆပ်ရမယ့်သူက နည်းပြပယ်လီဂရီနီဖြစ်လာပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌပီရက်ဇ်နဲ့ အသင်းအမှုဆောင်ချုပ် ဟိုဆေးအိန်ဂျယ်ဆန်းချက်ဇ်တို့ဟာ နည်းပြသစ်ခန့်အပ်ဖို့ ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်ပင်ကြပြီး သူတို့အဓိက ခေါ်ယူလိုတဲ့သူကတော့ အင်တာမီလန်အသင်းကို ၂၀၀၉-၁၀ ဘောလုံးရာသီမှာ စီးရီးအေဖလား၊ ကိုပါအီတာလီယာဖလားနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားအစရှိတဲ့ ဖလား(၃)လုံးရယူပေးခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီလူမျိုးနည်းပြမော်ရင်ဟိုပဲဖြစ်ပါတယ်။
■ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား
၂၀၀၉-၁၀ ဘောလုံးရာသီအပြီးမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့အတူ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲဝင်ကန်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ယူရို-၂၀၀၈ ပြိုင်ပွဲအပြီး ဘရာဇီးလ်လူမျိုးနည်းပြ စကိုလာရီအနားယူသွားခဲ့ပြီး မန်ယူလက်ထောက်နည်းပြဟောင်းကွီရော့ဇ်က ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ သူ့အပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအလွန်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိတဲ့ နည်းပြတွေနဲ့တွေ့ဆုံရတာဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူတယ်လို့ အသင်းဖော်တချို့ကယူဆကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်ရွေးစင်အသင်းလေ့ကျင့်ခန်း ပထမဆုံးနေ့ရက်တွေဆိုရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ (ကလပ်အသင်းကနေ လက်ရွေးစင်အသင်းကို ဆက်သွယ်ရောက်ရှိလာရမှာဖြစ်ပေမယ့်) အမြဲလိုလိုပျောက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကို စကိုလာရီက ဘယ်တော့မှအရေးမယူဘဲ မသိသလိုသာနေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် (၁၆)လကြာဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးနေမှုကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး မြောက်ကိုရီးယားကို (၇-၀) ဂိုးနဲ့ နိုင်တဲ့ အုပ်စုပွဲမှာ(၁)ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရှုံးထွက် (၁၆)သင်းအဆင့်မှာတော့ ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဖြစ်လာမယ့် စပိန်အသင်းကိုဒေးဗစ်ဗီလာရဲ့ တစ်လုံးတည်းသောဂိုးနဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲကထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ပွဲရှုံးတိုင်း ဒေါသထွက်စိတ်တိုတတ်တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူ့ရဲ့ဒေါသကို မထိန်းနိုင်ခဲ့ဘဲ Mixed Zone မှာ မီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကို ဘောက်ဆတ်ဆတ် ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကမီဒီယာသမားတွေက အသင်းခေါင်းဆောင်စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ပွဲရဲ့ ကစားပုံအားနည်းချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရာမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ” ကွီရော့ဇ်ကိုသွားမေး ” လို့ပြောခဲ့တာပါ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ ဒီပွဲရှုံးနိမ့်မှုအတွက် ကွီရော့ဇ်ရဲ့ လူစားလဲမှု၊ ကစားကွက် အခင်းအကျင်းတချို့ကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီး အခုလိုဖြေကြားလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပေါ်တူဂီသတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကွီရော့ဇ်ဟာ ဒီကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအပြီး (၂)လအကြာမှာ ပေါ်တူဂီအသင်းနည်းပြရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့လည်း ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြီးကတည်းက ဆက်ဆံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားရှုံးနိမ့်မှုအပြီးမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အသင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့အပြုအမူကိုမပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ကွီရော့ဇ်ကပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာလည်း စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စိတ်ကြီးဝင်တဲ့အမူအရာတွေ၊ ပွဲရှုံးရင်ညစ်တွန်းတွန်းတတ်တဲ့ အပြုအမူတွေ၊ မီဒီယာတွေကိုဆက်ဆံရာမှာ လူကြီးဆန်ဆန်ဒီပလိုမေစီကျကျ မပြောတတ်တာတွေကြောင့် သူ့အနေနဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ရာထူးနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေါ်တူဂီမီဒီယာတွေကတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို အမြဲဖေးဖေးမမရေးသားကြပြီး ပေါ်တူဂီဘောလုံးလောကရဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ဦးသဖွယ်သာ သဘောထားခဲ့ပါတယ်။
Posted in Article, SportTagged ကျွန်းငယ်လေးLeaveaComment on ■ ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၂၂)
■ ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၂၁)
■ ပီရက်ဇ်ရဲ့ ပြဿနာ
၂၀၀၉ နွေရာသီမှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရွေးချယ်ခံမယ့် သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရာမှာ ပီရက်ဇ်ကလွဲလို့တစ်ဦးတစ်ယောက်မှရှိမလာခဲ့ပါဘူး။ ရီးယဲလ်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပီရက်ဇ်ပြန်ပြီး ရွေးချယ်ခံမယ်ဆိုကတည်းက သူ့ကိုယှဉ်ပြိုင်လိုသူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိခဲ့တာကြောင့် ဥက္ကဋ္ဌသစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာ အသက်မဲ့ခဲ့ပြီး ဒီရာထူးဟာ ပီရက်ဇ်အတွက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၉၊ ဇွန်လ (၁)ရက်နေ့မှာ ပီရက်ဇ်ဟာ ရီးယဲလ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌအသစ်အဖြစ် စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၆ခုနှစ်အထိ ရီးယဲလ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပီရက်ဇ်အတွက် ဒါဟာရီးယဲလ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရီးယဲလ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပြီးနောက် ပီရက်ဇ်ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်က နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွင်း ကစားသမားအသစ်ခေါ်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ်ရီးယဲလ်ဥက္ကဋ္ဌ ပြုလုပ်စဉ်ကတည်းက Galaticos ကြယ်စင်စုလို့ အမည်ရတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ကစားသမားအစုအဖွဲ့ကို ခေါ်ယူဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ပီရက်ဇ်ကိုပရိသတ်တွေကလည်း စောင့်ကြည့်နေကြပြီး နာမည်ကျော်ကစားသမား ဘယ်သူတွေရောက်လာဦးမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်နေကြပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုကတော့ နွေရာသီကာလမတိုင်ခင်ကတည်းက ၂၀၀၈-၀၉ ရာသီကုန်ရင် ရီးယဲလ်ကိုရောက်မယ်လို့ ကြိုတင်သတင်းတွေထွက်ရှိနေတာကြောင့် သူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ့် နေ့ရက်ကိုလည်း ပရိသတ်တွေက စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပီရက်ဇ်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုက သူ့ရှေ့ကဥက္ကဋ္ဌရေမွန်ကယ်လ်ဒါရွန်ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းသွားတဲ့ ကစားသမားကို သူကခေါ်ယူရမှာအင်တင်တင်ဖြစ်နေသလို စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက်ပေးချေရမယ့် ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်း (၈၀)ကလည်း များပြားလွန်းတယ်လို့ ထင်နေပါတယ်။ ကယ်လ်ဒါရွန်ဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် မန်ယူအသင်းနဲ့ သဘောတူညီမှုရရှိအောင် ကြိုးပမ်းသွားနိုင်ခဲ့တာသာရှိပြီး၊ ဒီအပြောင်းအရွှေ့အတွက် ငွေကြေးထားသွားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုပေးချေရမယ့် ပီရက်ဇ်ဟာပေါင်သန်း (၈၀)ဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းအတွက် စိတ်ညစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မခေါ်ခဲ့ပြန်ရင်လည်း ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေရဲ့ဒေါသနဲ့ စာချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုအတွက် ပေးချေရမယ့်လျော်ကြေး ယူရိုသန်း (၃၀)ဆိုတဲ့ ပြဿနာလည်းရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင် သူကိုယ်တိုင်လည်း ၂၀၀၈ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုရ စီရော်နယ်လ်ဒိုကိုသူ့အသင်းမှာ ရှိနေစေချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ ဖာဂူဆန်နဲ့မန်ယူအသင်းကိုပဲ ဈေးဆစ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
ပီရက်ဇ်အနေနဲ့ နွေရာသီမှာ အခြားနာမည်ကြီးကစားသမားတွေကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုတစ်ဦးတည်းကို ငွေကြေးပုံအောမသုံးချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးအဖြစ်အောင်မြင်နေတဲ့ ပီရက်ဇ်ဟာ စပိန်နိုင်ငံရေးလောကမှာလည်း ကျင်လည်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ACS ကုမ္ပဏီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပီရက်ဇ်ဟာ သူ့လက်ထက်မှာ ရီးယဲလ်အသင်းကိုစီးပွားရေးအရရော၊ ပုံရိပ်ကောင်းအောင်ပါ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်က၀င်ငွေယူရို (၃၆၆)သန်းရှိတဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာယူရိုသန်း (၆၀၀)ကျော်ဝင်ငွေရှိလာအောင် စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကရဲ့ ကြေးအကြီးဆုံးကစားသမားသစ်ခေါ်ယူမှုတွေကလည်း သူ့လက်ထက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဇီဒန်း၊ ကာကာ၊ စီရော်နယ်လ်ဒို၊ ဂါရတ်ဘေးလ်၊ ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွက်ဇ် အစရှိတဲ့ ကစားသမားတွေကို ရီးယဲလ်ကစားသမားဖြစ်လာအောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ အသင်းအားကစားဒါရိုက်တာ ဂျော့ခ်ျဗယ်လ်ဒါနိုဟာ မန်ယူအသင်းထံဆက်သွယ်ပြီး ပြောင်းရွှေ့ကြေးလျော့ကျအောင် ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အကျိုးတော့ထူးမလာခဲ့ပါဘူး။ ပီရက်ဇ်ဟာ သူရီးယဲလ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာရင် ခေါ်ယူမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးရှိပါတယ်။ ဒီကစားသမားကတော့ ၂၀၀၇ ဖီဖာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုရ ဘရာဇီးလ်ကွင်းလယ်လူကာကာပါပဲ။ ကာကာကိုခေါ်ယူဖို့ အရင်ဥက္ကဋ္ဌကယ်လ်ဒါရွန်ကလည်း ကြိုးစားခဲ့ဖူးပြီး ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိလို့ ပီရက်ဇ်က သူ့လက်ထက်မှာရအောင်ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင်ပီရက်ဇ် နောက်ထပ်ခေါ်ယူချင်တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးကတော့ လိုင်ယွန်အသင်းရဲ့ ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူး ဘန်ဇီမာပါပဲ။ မန်ယူအသင်းက စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ဈေးလျှော့မပေးဘဲတင်းခံနေတာကြောင့် ပီရက်ဇ်ဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ အလျှော့ပေးခဲ့ပြီး ပေါင်သန်း (၈၀)နဲ့ပဲ ခေါ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ၂၀၀၉ နွေရာသီမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားကို အပန်းဖြေခရီးထွက်ခွာနေပြီး နံနက်ခင်းတစ်ခုမှာ အေးဂျင့်မန်ဒက်စ်ဆီကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုရောက်ရှိလာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဒီနေ့ကစပြီး ရီးယဲလ်ကစားသမားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ စာချုပ်မှာပါတဲ့ လျော်ကြေးက ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးပမာဏဖြစ်တဲ့ ပေါင် (၁) ဘီလီယံဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ၂၀၀၉၊ ဇူလိုင် (၁၀)ရက်နေ့မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာရီးယဲလ်ကစားသမား တရားဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မက်ဒရစ်မြို့ Torrejon လေဆိပ်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ဂျော့ခ်ျမန်ဒက်စ်ကိုယ်တိုင်လာကြိုခဲ့ပြီး စာချုပ်အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးမယ့် ဘာနေဗျူးကွင်းက Puerta 57 စားသောက်ဆိုင်ကို မန်ဒက်စ်နဲ့အတူ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ စာချုပ်က(၆)နှစ်စာချုပ်ဖြစ်ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ တစ်ပတ်လစာငွေပေါင် (၁၈၃၀၀၀)နဲ့ ပထမဆုံးနှစ်အတွက်ပေါင် (၉ .၅) သန်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လစာငွေဟာ တစ်နှစ်ချင်းစီ (၂၅%) တိုးမြင့်သွားမှာဖြစ်ပြီး စာချုပ်သက်တမ်းအတိုင်း ရီးယဲလ်ကစားသမားအဖြစ် (၆)နှစ်လုံး ကစားခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ဝင်ငွေကပေါင် (၁၀၆) သန်းအထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက် Puerta 57 စားသောက်ဆိုင်အတွင်းမှာ ရီးယဲလ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အဆာပြေနေ့လယ်စာသုံးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
စာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲအခမ်းအနားပြီးတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ရီးယဲလ်အသင်းပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို မခေါ်မီရက်ပိုင်းမှာ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ အေစီမီလန်ကွင်းလယ်လူ ကာကာကိုခေါ်ယူစာချုပ်ခဲ့ပြီး ဘာနေဗျူးကွင်းအတွင်း ပရိသတ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့ရာမှာ ပရိသတ် (၄၀၀၀၀)ကျော်လာ ရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာနေဗျူးကွင်းထဲကိုမသွားမီ စီရော်နယ်လ်ဒိုက မန်ဒက်စ်ကို သူတည်းခိုတဲ့ Mirasierra Suites ဟိုတယ် မှာ ” ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမှာလဲ။ အင်္ကျီကတံဆိပ်ကိုနမ်းပြရမှာလား။ နောက်ပြီး ဘာထပ်လုပ်ပြရဦးမှာလဲ။ Hala Madrid လို့ အော်ရမှာလား ” လို့နောက်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်း ဘာနေဗျူးကွင်းထဲကို ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ကိုလာရောက်ကြိုဆိုတဲ့ ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေကို စီရော်နယ်လ်ဒိုအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာနေဗျူးကွင်းအတွင်း ပရိသတ် (၈၀၀၀၀)ကျော်က စီရော်နယ်လ်ဒိုကို စောင့်မျှော်နေကြပြီး ဒီပမာဏဟာ ရီးယဲလ်အသင်းကစားသမားသစ်မိတ်ဆက်ပွဲတွေထဲမှာ အများဆုံးပမာဏဖြစ်ပါတယ်။
■ ရီးယဲလ်အစ နံပါတ်(၉)
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ မန်ယူအသင်းမှာရော၊ ပေါ်တူဂီအသင်းမှာပါ နံပါတ် (၇)အင်္ကျီဝတ်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် ရီးယဲလ်အသင်းကိုရောက်ရှိလာရာမှာ ကျောနံပါတ် (၇)တော့ ချက်ချင်းဝတ်ဆင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရီးယဲလ်အသင်းမှာ သြဇာကြီးမားတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရာအူးလ်က ကျောနံပါတ်(၇)ကိုဝတ်ဆင်နေလို့ပါပဲ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပေါ်တူဂီအသင်းမှာလည်း လက်ရွေးစင်အဖြစ် စကစားချင်းမှာ နံပါတ် (၇)၀တ်ဆင်သူကအသင်းရဲ့ အဓိက၀ါရင့်ကစားသမား ဖီဂိုဖြစ်နေတာကြောင့် နံပါတ် (၁၇) သာဝတ်ဆင်ခဲ့ရပြီး ဖီဂိုလက်ရွေးစင်အသင်းက အနားယူချိန် ၂၀၀၆ခုနှစ်မှ ကျောနံပါတ်(၇)ကို ၀တ်ဆင်ခဲ့ရတာပါ။ အခုရီးယဲလ်မှာလည်း နံပါတ် (၉)အင်္ကျီကို စတင်ဝတ်ဆင်ခဲ့ရပြီး ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ အာရေဘီယံအစရှိတဲ့ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ ရေးထိုးထားတဲ့ သူ့ရဲ့အမည်ပါ နံပါတ် (၉)အင်္ကျီကို ကိုင်မြှောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ပရိသတ်တွေကို သူ့ရဲ့ဘောလုံးစွမ်းရည်တချို့နဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်ကစားသမားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဒီစတီဖာနို၊ ဟွမ်နီတို အစရှိသူတို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ရာအူးလ်၊ ဇီဒန်းအစရှိတဲ့ အသင်းကကြယ်ပွင့်ကစားသမားတွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဇိုကို၊ ဆမ်တာမာရီယာ၊ ပါချင်၊ အမန်စီယို အစရှိတဲ့ ရီးယဲလ်ကစားသမားဟောင်းကြီးတွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ပေါ်တူဂီဂန္ထ၀င်အူဆီဘီယိုလည်း ဒီအခမ်းအနားကို တက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဘာနေဗျူးကွင်းထဲမှာတော့ ” ရော်နယ်လ်ဒို၊ ရော်နယ်လ်ဒို ”ဆိုတဲ့ အသံတွေဆူညံနေပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုက ပရိသတ်တွေကို ” ကျွန်တော် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာကစားချင်တဲ့ အိပ်မက်က ဟိုးအရင်ကလေးဘ၀ကတည်းက ရှိခဲ့တာပါ။ အခုတော့ ဒါဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်ကိုအံ့အားသင့်စရာပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာက ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူစကားလုံးတစ်ခုကိုလိုက်အော်ပေးဖို့ပါ။ ကျွန်တော် တစ်၊ နှစ်၊ သုံးလို့အော်ပြီးရင် ခင်ဗျားတို့ ပြိုင်တူလိုက်အော်ပေးပါ။ ကျွန်တော်အော်မယ့် စကားလုံးက Hala Madrid (တော်ဝင်မက်ဒရစ်ဟု စပိန်ဘာသာစကားဖြင့် ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်) ပါ။ ကဲ၊ အော်ရအောင်။ One, Two, Three…… Hala Madrid ” လို့အော်ဟစ်ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုက ပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးမှုကို ချက်ချင်းရယူလိုက်ပါတယ်။
■ ရီးယဲလ်ခေတ်ပြောင်း တော်လှန်ရေး
ကာကာ၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ကိုခေါ်ယူပြီး နောက်မှာပီရက်ဇ်ဟာ ဘန်ဇီမာကိုထပ်ခေါ်ခဲ့ပြီး အဲဒီ ၂၀၀၉နွေရာသီမှာ ကစားသမားအင်အားဖြည့်မှုကို အကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးလ်က ဇာဘီအလွန်ဆိုနဲ့ အာဘီလိုအာ၊ အယ်လ်မီရီယာက နီဂရီဒို၊ ရေးဆင်းက ဂါရိုင်းအစရှိတဲ့ ကစားသမားတွေအပါအ၀င် ကစားသမားစုစုပေါင်း (၁၀)ဦးအထိခေါ်ယူခဲ့ပြီး သုံးစွဲငွေက ယူရိုသန်း (၂၆၀)နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းအနေနဲ့ ၂၀၀၉-၁၀ဘောလုံးရာသီမစမီ အားဖြည့်ပြင်ဆင်မှုတွေမလုပ်လို့မရတော့တဲ့ အနေအထားပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈-၀၉ဘောလုံးရာသီမှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ အဓိကပြိုင်ဘက်ဘာစီလိုနာအသင်းက လာလီဂါဖလား၊ စပိန်ဘုရင့်ဖလား၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားတွေရယူသွားခဲ့ပြီး ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ ရာသီကြိုစပိန်စူပါဖလား(၁)လုံးနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ လာလီဂါမှာ ဘာစီလိုနာနောက် ဒုတိယနေရာ၊ စပိန်ဘုရင့်ဖလားမှာ ရှုံးထွက်(၃၂)သင်းအဆင့်၊ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့် အစရှိတာတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ရလို့ ပီရက်ဇ်ဟာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကို မဖြစ်မနေလုပ်ရတော့မယ်လို့သဘောပေါက်ခဲ့ပြီး နည်းပြနေရာမှာလည်း ချီလီလူမျိုးနည်းပြ ပယ်လီဂရီနီကို ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တော့ ပီရက်ဇ် ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာ အာစင်ဝင်းဂါး၊ အန်ဆယ်လော့တီတို့ဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ချဉ်းကပ်ကြိုးစားရာမှာ မအောင်မြင်ခဲ့လို့ ဗီလာရီးယဲလ်မှာ ရလဒ်ကောင်းတွေရယူပေးခဲ့တဲ့ ပယ်လီဂရီနီကို ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပယ်လီဂရီနီဟာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း အသစ်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ကြယ်ပွင့်ကစားသမား(၃)ဦးဖြစ်တဲ့ ကာကာ၊ စီရော်နယ်လ်ဒို၊ ဘန်ဇီမာတို့နဲ့ အသင်းက ၀ါရင့်တိုက်စစ်မှူးကြီး ရာအူးလ်ကို တစ်ပြိုင်တည်းသုံးနိုင်တဲ့ကစားကွက်ကို ရေးဆွဲရပါတယ်။ ရာအူးလ်ကို အထောင်ထား၊ ရော်နယ်လ်ဒိုကို ဘယ်တောင်ပံထား၊ ကာကာကို ညာတောင်ပံထားပြီး ဘန်ဇီမာကို ရာအူးလ်နောက် နောက်ချန် တိုက်စစ်မှူးအဖြစ် ကစားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၀၉-၁၀ရာသီအစ လာလီဂါပွဲစဉ် (၄)ပွဲမှာပဲ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အသင်းအတွက် (၅)ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပြီး နယ်မြေသစ်မှာ ဒီလိုဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်ပြီးနောက် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဂိုးပိုမိုဆာလောင်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာ သွင်းဂိုးအရေအတွက်များများသွင်းယူနိုင်ဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြလာပြီး ပယ်လီဂရီနီကလည်း သူ့ကို ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့သွင်းဂိုးတွေအတွက် ပိုမိုအားထားဖို့ ဆန္ဒရှိလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို တောင်ပံကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် Formation မှာ ထည့်သွင်းခဲ့ပေမယ့် တိုက်စစ်မှာနေရာစုံစိတ်ကြိုက် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုခွင့်ပြုခဲ့ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုဂိုးတွေသွင်းယူလာနိုင်ခြင်းက အသင်းရဲ့ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး ရာအူးလ်အတွက် အသင်းနဲ့လမ်းခွဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ရလာပြီး ဒဏ်ရာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ ရာအူးလ်ဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ တစ်ရာသီသာလက်တွဲခဲ့ပြီး ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီကုန်မှာ ရှော်လ်ကေးအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ အသင်းက ရာအူးလ်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ကျောနံပါတ်(၇)အင်္ကျီနဲ့ ပြန်လည်ဆုံဆည်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
Posted in Article, SportTagged ကျွန်းငယ်လေးLeaveaComment on ■ ကျွန်းငယ်လေးမှသည် ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (၂၁)